ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: March 2010
Air hostesses create turbulence
လစာမပေးယင် ...လေယာဉ်တစ်စီးလုံးသိမ့် သိမ့် တုန်သွားစေရမယ်...
လုပ်ခလစာများ မရရှိကြသေးတဲ့ လေယာဉ်မယ်တွေဟာ အလုပ်ရှင်၊ ကုမ္ပဏီကြောင့် သူတို့ ရဲ့ နစ်နာမှုများ
နှင့်ပါတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားနေမှုကို အများပြည်သူတွေ သိရှိ၊ သတိပြုမိစေရန်အတွက် သူတို့ ရဲ့ အ၀တ်အ
စားများချွတ်ပြီး ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ ကြပါတယ်...
ယခုအခါ ဒေ၀ါလီခံသွားခဲ့ ရပြီဖြစ်တဲ့စပိန်ကြယ်တံခွန်လေကြောင်းလိုင်းမှ လေယာဉ်မယ် ၉ ဦးဟာ အ
သစ်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေမယ့် ပြက္ခဒိန်တစ်ခုအတွက် အ၀တ်အစားဗလာ၊ ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံခဲ့ 
ကြကာ သူတို့ ရဲ့ အခက်အခဲအခြေအနေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် သိရှိနိုင်ကြစေဖို့ နဲ့ ပြဿနာကို အဖြေ
ရှာပေးနိုင်ဖို့ ဆက်လက်ကြိုးပမ်းခဲ့ ကြတာဖြစ်ပါတယ်...
လေကြောင်းလိုင်းဟာ လွန်ခဲ့ တဲ့ ဒီဇင်ဘာလကတည်းက ဒေ၀ါလီမခံခင်ကပင် ၀န်ထမ်းတွေကို ကိုးလစာ
လေကြောင်းကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ယခုအခါ ပေးချေရန်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ လုပ်ခ လစာများအပါအ၀င် ကြွေးမြီ
စုစုပေါင်း ယူရိုဒေါ်လာ ၁၆၀ သန်း ( အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၁၅ သန်း ) တင်ရှိနေပါတယ်...
အဆိုပါလေယာဉ်မယ်များအနေနဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲကနေ (နောက်ထပ်ဝယ်ယူသူ သို့ မဟုတ်
စီမံခန့် ခွဲသည့် ပိုင်ရှင်အသစ်အနေဖြင့် ) ၎င်းတို့ ရဲ့ လုပ်ခ၊ လစာများကို ဦးစားပေးအစီအစဉ်အနေနဲ့ ပေး
စေရန် သူတို့ ရဲ့ တောင်းဆိုမှုကို အလေးအနက်ဖြစ်ကာထင်ရှားစေဖို့ အတွက်ယခုလို သူမတို့ ပိုင်ဆိုင်သ
မျှသော ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကို ပြသပြီး ပြက္ခဒိန်မှာ ရိုက်နှိပ်ဖော်ပြဖို့ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ခြင်းပဲ
ယခုလိုအ၀တ်မပါ၊ကိုယ်ဗလာဖြင့် ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံခြင်းဖြင့် လည်း ရရှိတဲ့ (အခကြေးငွေဖြင့် )၎င်းတို့ ရဲ့ 
ငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲတွေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ ၎င်းတို့ ကရည်ရွယ်
မျှော်လင့် ထားကြပါတယ် လို့ ထိုကာလသားကြိုက် ပြက္ခဒိန်အလှရိုက်ကူးရေးစီမံကိန်းကို ပူးတွဲစီစဉ်တဲ့ 
Azafatas Alta con Tacon လို့ အမည်ရတဲ့ လေယာဉ်မယ်များနဲ့ မော်ဒယ်များရဲ့ အေဂျင်စီ မှပုဂ္ဂိုလ်တစ်
ဦးဖြစ်တဲ့မိုက်ကယ်ဗေလက်စကို ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
လေယာဉ်မယ် ကိုးဦးဟာ ဓါတ်ပုံဆရာ သြဂတ်စတိုရောဘတ် စိတ်ကြိုက်ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ လေယာဉ်နဲ့ သက်
ဆိုင်တဲ့ ဆက်တင်ရှုခင်းနောက်ခံအမျိူးမျိူးမှာ ကိုယ်လုံးတီး ကိုယ်ဟန်ပြခဲ့ ကြပါတယ်...
အဲဒီလိုတော့ မလုပ်နဲ့ နော်...
သူတို့ ဆီက လခ မရလို့ လခရအောင်ဆန္ဒပြ၊ ကြိုးစားရတာလည်း တယ်မလွယ်ပါလား...
သူတို့ ကို အဲဒီအတိုင်းသာလေယာဉ်ပေါ်မှာ လေယာဉ်မယ်အဖြစ်သာအမှုထမ်းခိုင်းလိုက်ယင် ထိုလေ
ကြောင်းလိုင်းလည်း အမြတ်အစွန်းတွေ သန်းနဲ့ ချီသွားနိုင်လောက်တယ်နော်...
Protesting air hostesses have stripped off to publicise their row with their employers over unpaid wages.
The nine girls, all flight attendants with the now bankrupt Spanish Air Comet airline, posed nude foracalendar to "continue to publicize their situation and demandasolution".
The airline failed to pay staff for up to nine months before it finally filed for bankruptcy last December.
The company had debts of around 160 millions euros when it folded including unpaid wages.
Now the girls have decided to pose for the calendar to highlight their demand for unpaid wages to be paid asapriority from the firm's assets by showing off their own assets.
They are also hoping to earn money from the calendar "to help their financial situation," says Michel Velasco from Azafatas Alta con Tacon, an agency for flight attendants and models and one of the co-organisers of the project.
Nine flight attendants posed nude for photographer Augusto Robert in different airplane-related settings.
Posted by Unknown | at 11:28 AM |2comments
Labels: news: annanova
ကျားလှောင်ထားတဲ့ ခြံပေါ်မှ ကြိုးတန်းလမ်းလျှောက်သည့် အသက် ၃ နှစ်အရွယ်ကလေးမလေး...
တရုတ်နိုင်ငံမှ တိရိစ္ဆာန်ရုံတစ်ရုံရဲ့ တာဝန်ရှိသူများဟာ အသက် ၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ဆပ်ကပ်မယ်လေးတစ်
ဦးကို ကျားများလှောင်ထားတဲ့ နေရာ (အမိုးမပါတဲ့ ကျားလှောင်အိမ် ) အထက်ကနေ ကြိုးတန်းလမ်း
လျှောက်ခွင့် ပြုခဲ့ တဲ့ အတွက် အပြင်းအထန်ဝေဖန်ပြစ်တင်ခံနေခဲ့ ကြရပါတယ်...
အဆိုပါ ကလေးမလေးဟာ ကျန်စုပြည်နယ်၊ ချန်ကျိူးရန်ချင်း တိရိစ္ဆာန်ရုံမှာ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ဆာလောင်
နေတဲ့ ဆိုက်ဘေးရီးယားကျားခြောက်ကောင်ရှိတဲ့ နေရာရဲ့ အထက်ကနေ ၁၃၀ မီတာအရှည်ရှိ ကောင်း
ကင်ကြိုးတန်းပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်ပြခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
သူမဟာ အဆိုပါကြိုးတန်းလမ်းလျှောက်မှုပြကွက်မှာ သူမရဲ့ ရှေ့ ကနေသွားနှင့် တဲ့ စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့ ၎င်း
စက်ဘီးကိုတွဲခိုထားတဲ့ လှေကားတစ်ခုတို့ မှာလိုက်ပါစီးနင်းခဲ့ ကြတဲ့ အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ လူနှစ်ဦးတို့ 
ပါဝင်တဲ့ အစီအစဉ်ထဲက အဖွဲ့ ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
အသက်သုံးနှစ်မျှသာရှိသေးတဲ့ကျန်းရှောင်ယန် လေးဟာသူမရဲ့ ခါးမှာ ကြိုးသေးသေးလေးတစ်ချောင်း
သာချိတ်ဆွဲထားပြီး ကြိုးတန်းပေါ်ကိုလမ်းစပြီးလမ်းလျှောက်လာတာနဲ့ ကြည့် ရှုတွေ့ မြင်ရတဲ့ လူအပေါင်း
ဟာ အံ့ သြထိတ်လန့် သွားခဲ့ ကြရပါတော့ တယ်...
လေပြင်းတစ်ချက်တိုက်လိုက်လို့ သူမရဲ့ ပထမခြေလှမ်းယိုင်သွားခဲ့ ပြီး ကျလုနီးနီးဖြစ်သွားခဲ့ တဲ့ အတွက်
အောက်မှာကြည့် နေတဲ့ လူတွေဟာ ထိတ်လန့် တစ်ကြားနဲ့ အော်ဟစ်ခဲ့ ကြပါတယ်လို့ မျက်မြင်သက်သေ
ကလေးမလေးဟာ သူမရဲ့ ကိုယ်ကိုဟန်ချက်ညီစေရန် တုတ်ချောင်းတစ်ခုကိုမျှ မသုံးပဲသူမရဲ့ လက်ကိုသာ
ဆန့် တန်းပြီးဟန်ချက်ညီစေကာထိန်းပြီးကြိုးတန်းပေါ်မှာ လျှောက်လှမ်းခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
သူမအခုလိုလျှောက်လှမ်းနေချိန်မှာ ကျားတွေဟာ အောက်မှာသွားလာနေကြပြီး၊ ကျားတစ်ကောင်ဟာ
ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ရုံကိုလာရောက်ကြသူတွေဟာ အခုလိုစွန့် စားခန်းဟာ
ဖြင့် ကလေးသူငယ်များကို အလွဲသုံးစားပြုရာရောက်တယ် ( ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ရာရောက်တယ်...) လို့ 
" အကယ်၍ အဲဒီကလေးမလေးသာကျွန်ုပ်ရဲ့ ရင်သွေးဖြစ်ခဲ့ မယ်ဆိုယင်တော့ သူမဘယ်လောက်ပဲတော်
နေ၊ ကျွမ်းကျင်နေပါစေ ( ကြိုးတန်းလမ်းလျှောက်တာ ) ဘယ်တော့ မှ ဒီလိုမျိူးလုပ်ဖို့ ခွင့် ပြုမှာမဟုတ်
ပါဘူး..." လို့ ကလေးများရဲ့ မိဘတစ်ဦးကမကြေနပ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
တိရိစ္ဆာန်ရုံရဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကတော့သူတို့ ဟာ ကျန်းရှီ လူငယ်များအနုပညာ ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့ 
လို့ အမည်ရတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့ ကိုငှားရမ်းခဲ့ တာဖြစ်ပြီး ထိုအဖွဲ့ ဟာလိုအပ်တဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ
ကိရိယာများနှင့် စည်းမျဉ်းများနှင့် လည်းပြည့် စုံခဲ့ ပါတယ် လို့ ဆိုပါတယ်...
အဆိုပါအဖွဲ့ ရဲ့ ဒါရိုက်တာ ကျန်းရှန်ဝမ် ကလည်း ကလေးမလေးရှောင်ယန် ဟာ ကမ္ဘာ့ အသက်အငယ်
ဆုံးကြိုးတန်းလမ်းလျှောက်သူဖြစ်ပြီး သူမအသက်တစ်နှစ်အရွယ်ကတည်းက စတင်လေ့ ကျင့် သင်ကြား
ကလေးမလေးဟာ သူ့ ကိုယ်သူစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ကောင်းစွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်...သူမအနေ
နဲ့ အသက် ၇ နှစ်မှာ ကြိုးတန်းလမ်းလျှောက်ခြင်းကနေ အနားယူပြီးကျောင်းသွားတက်မှာဖြစ်ပြီး တက္က
သိုလ်အထိ တက်ရောက်ကာပညာသင်ကြားဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ် လို့ ပြောကြားသွားပါတယ်...
ပေါက်ဖော်ကြီးတို့ ဆီမှာက လူဦးရေသန်းတစ်ထောင်ကျော်မို့ သိပ်ဂရုမစိုက်တာပါ...
"She has very good psychological control," he added, saying she would retire at the age of seven to go to school and eventually planned to go to university.
Posted by Unknown | at 10:48 AM | 1 comments
Dubai Briton faces jail over 'middle finger salute'
ဒူဘိုင်းမှာ ဒီလိုမျိူးလုပ်လို့ မရပါ....
ဒူဘိုင်းမှာ ဒါမျိူးလာမလုပ်နဲ့ ...ရှော့ခ်ရှိတယ်နှမငယ်...
ဒူဘိုင်းတွင်လာရောက်နေထိုင်လုပ်ကိုင်နေသည့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးဟာ စကားများရင်းစိတ်မထိန်း
နိုင်ပဲ တစ်ဖက်လူကို လက်ခယ်ထောင်ပြခဲ့ ( လွန်စွာရုန့် ရင်းကြမ်းတမ်းသောကိုယ်အမူအရာဖြင့် ဆဲရေး
ခြင်း ) မိလို့ ထောင်ဒါဏ်အပြစ်ပေးခံရကာ ဗြိတိန်ကိုပါပြန်လည်နှင်ထုတ်ခံရပါတော့မယ်...
စကားအခြေအတင်များကြတဲ့ အဖြစ်မှာ ၎င်းအနေနဲ့ အီရတ်နိုင်ငံသား လေကြောင်းသိပ္ပံကျောင်းသား
မာမွတ်ရာရှစ် ကို မဖွယ်မရာ လက်ခလယ်ဖြင့် ပြသဆဲရေးခဲ့ ခြင်းမရှိပါဘူးလို့ ဒူဘိုင်းတရားရုံးမှာ သူ
သူဟာလာမယ့် တနင်္ဂနွေနေ့ မှာ ပြည့် ပြည့် စုံစုံနာကြားမယ့် တရားရုံးကြားနာစစ်ဆေးမှုကို လာရောက်
တရားရုံးကိုသက်သေခံထွက်ဆိုဖို့ လာရောက်ခဲ့ သေးခြင်းမရှိသေးတဲ့ ရာရှစ် အနေနဲ့ သူ့ ကိုအထင်အ
မြင်လွဲနေတာသာဖြစ်ပါတယ်၊ လက်ဆိုလို့ ဘယ်လက်ချောင်းမှ မထောင်ပြခဲ့ ပါဘူးလို့ မစ္စတာ အင်ဒရူး
တနင်္ဂနွေနေ့ ကပြုလုပ်ခဲ့ တဲ့ ကြားနာမှုမှာတော့ သူ့ ရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက အာမခံအဖြစ်အပ်နှံထားတဲ့ 
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို ထိုသူငယ်ချင်းအနေနဲ့ ပြည်ပသို့ ခရီးထွက်စရာရှိပါသဖြင့် ပြန်လည်ထုတ်ပေးပါရန်
သူ့ ကိုတစ်ခြားနောက်ထပ်လူတစ်ဦးရဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ အစားထိုးပေးဖို့ တရားရုံးကပြောကြားခဲ့ ပါ
သူ့ ရဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်ကိုလည်း အမှုမပြီးဆုံးခင် ဒူဘိုင်းကနေထွက်ခွာသွားလို့ မရအောင် သိမ်း
ဒူဘိုင်းမှာ ယခုလိုကိုယ်အမူအရာဖြင့် ရမ်းကားစောကားတဲ့ အပြုအမူမျိူးကို လက်ခံလေ့ မရှိပဲ တွေ့ ရှိတိုင်
ကြားခံရပါက ထောင်ဒါဏ်ခြောက်လကျခံရမည့် အပြင် နိုင်ငံမှ နှင်ထုတ်ခြင်းပါခံရမှာဖြစ်ပါတယ်...
A British expatriate in Dubai is facing jail and deportation after being accused of makingasingle-finger gesture in an argument. Simon Andrews, 56, has had his passport confiscated for almost eight months while waiting for his case to be heard.
He told Dubai Court of Misdemeanours he denies "flipping the finger" at Mahmoud Rasheed, an Iraqi aviation student, during an argument. He will appear in court on Sunday forafull hearing of the case.
Mr Andrews has said Mr Rasheed, who has not yet appeared in court to give evidence, is mistaken and no finger was raised. Atacourt hearing on Sunday, he asked for the passport put up as bail surety for him byafriend to be returned as the friend had to go abroad for work.
He was told to provide another passport in its place. His own passport has also been confiscated, preventing him leaving Dubai before the case is heard. Making insulting gestures is regarded as unacceptable, and carries with it the possibility ofajail sentence of up to six months and deportation.
Posted by Unknown | at 10:16 AM |0comments
Labels: news: telegraph.co.uk
Sons build carriage to take 81-year-old mother on 4500-km walk through China to Taiwan
အမေ့ ကျေးဇူးဆပ်လို့ မကုန်ပါ....
တရုတ်နိုင်ငံမှ အဖွားဝမ်ယွီရှား ရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သူမကို တစ်ချိန်မှာ နိုင်ငံအနှံ့ လှပတဲ့ နေရာရှုခင်းတွေ
ဆီလိုက်ပို့ ပေးမယ်လို့ ကတိစကားထားခဲ့ ဘူးပါတယ်...
ဒါပေမယ့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ မမျှော်လင့် ပဲရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ လို့ သူမရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ဟာ
ဒါကြောင့် သူတို့ ဖခင်ရဲ့ ကတိစကားကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ တာဝန်ဟာ သူမရဲ့ သားဖြစ်သူနှစ်ဦးအ
ပေါ်မှာသာ မူတည်နေပါတော့ တယ်...
အသက် ၈၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မိခင်ကြီးဟာအလွယ်တစ်ကူ ကားမူးတတ်တဲ့ အပြင် ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း
မချမ်းသာကြတာမို့ အဆင့် မြင့် ဇိမ်ခံပြီး အထက်တန်းအဆင့် နဲ့ ခရီးသွားပြီးပို့ ဆောင်ပေးဖို့ မတတ်နိုင်
တာမို့အဖွားရဲ့ သားနှစ်ယောက်ဟာ သုံးဘီးရထားလုံးကိုယ်ထည်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပြီး သူတို့ ကိုယ်
တိုင်ပဲ ရှေ့ မှဆွဲယူကာလမ်းလျှောက်ပြီး နိုင်ငံအနှံ့ ကိုလိုက်ပို့ ခြင်းအားဖြင့် မိခင်ကြီးအပေါ်ထားရှိတဲ့ ၎င်း
တို့ ရဲ့ မေတ္တာတရားကို ဖော်ညွှန်းဖို့ စီစဉ်ခဲ့ ကြပါတယ်...
သွားခဲ့ တဲ့ ခရီး....
" ကျွန်တော်တို့ ဟာ ငွေကြေးရလိုမှု၊ အောင်မြင်ကျော်ကြားလိုမှုတွေကြောင့် ဒီလိုလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး...
သားသမီးတွေက မိဘကိုကြည်ညိုကျေးဆပ်တဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ မင်္ဂလာတရားကို ပျံ့ နှံ့ သိမြင်စေချင်တာပါ...
ထွန်းကားစေချင်တာပါ..." လို့ အသက် ၅၉ နှစ်ရှိ အဖွားရဲ့ သားဖြစ်သူ ၀မ်ခိုင်း ကပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
" ကျွန်တော်တို့ မိခင်ဖြစ်သူက ကျွန်တော်တို့ ကိုပြုစုစောင့် ရှောက်ခဲ့ တာနဲ့ စာယင် အခုကျွန်တော်တို့ ပြန်
လည်တုံ့ ပြန်တာက ဘာမှမပြောပ လောက်ပါဘူး..." လို့ သူက ထပ်ပြောပါတယ်...
ရက်ပေါင်း ၁၆၅ ရက်အတွင်းမှာ သူတို့ ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးဟာ တရုတ်နိုင်ငံ၊ အရှေ့ မြောက်ပိုင်းဒေသဟေလုံ
ကျန်ပြည်နယ်မှ အရှေ့ တောင်ပိုင်းဒေသ ဖုကျင့် ပြည်နယ်အထိ ခရီးကီလိုမီတာ ၄၅၀၀ ( ၁၇၉၆ မိုင် ) ကို
မိခင်ကြီးကိုတင်ပြီး ရထားလုံးကိုဆွဲကာ ခြေလျှင်လျှောက်ခဲ့ ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်...
သူတို့ အဓိကဦးတည်သွားနေတာကတော့ ထိုင်ဝမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်...
" ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အဓိက အိပ်မက်ကတော့ မိခင်ကြီးကို ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတစ်လျှောက် လိုက်လံပို့ ဆောင်ပြ
သပေးဖို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်..." လို့ မစ္စတာ ၀မ်ခိုင်း ကပြောပြပါတယ်...
အဆိုပါ ရထားလုံးကို ယွမ်ငွေ ၅၀၀၀ ( ၇၃၀ ဒေါ်လာ ) အကုန်အကျခံတည်ဆော်ကထားတာဖြစ်ပြီးအ
ထဲမှာ အိပ်ယာသုံးခု၊ပြတင်းပေါက်များနဲ့ မိခင်ကြီးသက်တောင့် သက်သာသွားနိုင်ဖို့ အပူဒါဏ်ခံနိုင်အောင်
သူတို့ ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးဟာ မိခင်ကြီးရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ မေတ္တာတရားကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ အနေနဲ့ ထိုသုံးဘီးရထား
လုံးလှည်းကို "ကျေးဇူးတော်အောက်မေ့ ခြင်း " လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်...
လမ်းတစ်လျှောက် အစ်ကိုကြီးဖြစ်သူ ၀မ်ခိုင်းက ရထားလုံးကိုရှေ့ ကဆွဲပြီး ညီဖြစ်သူ အသက် ၅၇ နှစ်ရှိ
၀မ်ရွေး က နောက်ကနေတွန်းလေ့ ရှိပါတယ်...
အခုအထိတော့ သူတို့ ခရီးသွားရလွန်းလို့ ဖိနပ်ခြောက်ရံအထိ စုတ်ပြတ်ပျက်စီးကုန်ခဲ့ ရပါပြီ...
" ကျွန်တော်က တစ်မိနစ်ကို ခြေလှမ်း ၁၀၇ လှမ်း သွားနိုင်ပြီး တစ်နေ့ ကို ၁၀ နာရီ အထိနေ့ စဉ်သွားနိုင်
ခဲ့ ပါတယ်...ဒါကြောင့် တစ်နေ့ လုံးဆိုယင် ခြေလှမ်းပေါင်း ၆၅၀၀၀ သို့ မဟုတ် ခရီး ကီလိုမီတာ ၄၀ (၂၄.၈ မိုင် ) သွားနိုင်ခဲ့ တာပါ..." လို့ ညီဖြစ်သူ မစ္စတာ ၀မ်ရွေး ကပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
သူတို့ လိုပဲ အမေချစ်တဲ့ ၊ မိခင်၊ဘခင်တွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြုစု၊လုပ်ကျွေးနိုင်တဲ့ သားတွေ၊ သမီး
Wang Yuxia's husband once promised to take her to all the beautiful sights across the country. But when he suddenly died, it seemed her dream had died as well. So it was up to her sons to carry out their father's promise.
Realizing their 81-year-old mother gets carsick easily and they cannot afford to travel luxuriously, they builtathree-wheeled carriage to take her around the country - powered only by their own feet and the determination to express love.
"We are not doing this for money or fame. We are just spreading the virtue of filial piety," said Wang Kai, 59. "Compared to what our mother has done for us, what we give in return is never enough," he added.
In 165 days, the two brothers have hauled the carriage more than 4,500 km from Heilongjiang province in the northeast to Fujian province in the southeast. Their target destination is Taiwan. "Our biggest dream is to carry our mother around the island," Wang Kai said.
The carriage, built for 5,000 yuan ($ 730), is fitted with three beds, windows and heat-retaining panels to make mom comfortable. The brothers named it "Thanksgiving" to express gratitude for their mother's love.
On the road, Wang Kai pulls the carriage from the front while younger brother Wang Rui, 57, pushes it from behind. So far, they have worn out six pairs of shoes. "I can walk 107 steps every minute and 10 hours every day, which means 65,000 steps or about 40 kmaday," said Wang Rui.
Posted by Unknown | at 11:16 PM | 1 comments
Labels: news: what'sonxiamen.com
Broken hearted teenager cuts off his genitals
ညီလေး...မင်းရဲ့ ကံကိုက ဆိုးလွန်းပါတယ်ကွယ်...
AMD လို့ နာမည်အတိုကောက်သာ ဖော်ပြထားတဲ့ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်ရှိ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသား လူ
ငယ်လေးတစ်ဦးဟာ ချစ်သူကစွန့် ပစ်သွားခဲ့ လို့ အသည်းနှလုံးတွေကြေကွဲစွာနဲ့ ပဲ သူ့ ရဲ့ ဖွားဖက်တော်
ညီလေးကို ဖြတ်ပစ်ခဲ့ လို့ဂျာဗားကျွန်းရဲ့ စီိလာကက်ပ် အထွေထွေဆေးရုံကြီးမှာ အထူးကြပ်မတ်ကုသ
ဆေးရုံရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဆူဂျင်ဘူဒီဆန်တိုဆို က ထိုဖြစ်ရပ်ဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်းအ
တည်ပြုပြောကြားခဲ့ ပြီး ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးရဲ့ ဒါဏ်ရာကို ဆေးရုံမှ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်
လူငယ်လေးရဲ့ မိသားစုကတော့ အဖြစ်အပျက်ရဲ့ အသေးစိတ်ကိုပြောပြဖို့ ဆန္ဒမရှိပေမယ့်ကောင်လေးဟာ
သူ့ ရဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးတစ်ခြားအမျိူးသားတစ်ဦးနဲ့ လက်ထပ်သွားပြီဆိုတာ သိလိုက်ရပြီးနောက် အခု
လို သူ့ ရဲ့ ကိုယ်ရံတော်တပ်မှူးလေးကို ဖြတ်ပစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
အစပထမပိုင်းမှာ ကောင်လေးရဲ့ မိသားစုဟာ အဆိုပါကိစ္စနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး သူ့ ကို ( မဖြတ်ဖို့ ) ဖြောင်းဖျ
ပြောဆိုဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ကြပါသေးတယ်...
ဒါပေမယ့် ကိုယ်တော်ချောက စိတ်ကြီးလေတော့ဖြတ်ပစ်လိုက်ပြီးရေတွင်းထဲကိုပစ်ချခဲ့ လိုက်လို့ ပြန်
လည်ရှာဖွေလို့ မတွေ့ ရတော့ ပါဘူး...
An apparently broken hearted nineteen year-old, AMD, cut off his genitals and had to undergo serious treatment ataCilacap General Hospital, Central Java.
The hospital`s Director Sugeng Budi Santoso, confirmed the incident and said the hospital is doing its best to heal the teenager`s wound.
The teenager`s family is unwilling to give the incident`s details, and only said the boy cut off his genitals learning that his girlfriend had married another man.
Initially AMD`s family tried to persuade in dealing with the case, but it was too late, because his cut-off his penis was already thrown intoawell and could not be found.
Posted by Unknown | at 9:55 AM |2comments
Labels: news: antaranews.com
ကမ္ဘာ့ အန္တရာယ် အရှိဆုံး ဟူစိန်နီ ကြိုးတံတား...
ဟူစိန်နီကြိုးတံတားဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အန္တရယ်အရှိဆုံး၊ လုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိဆုံးကြိုးတံတားပါတဲ့ ...
တံတားဟာဟောင်းနွမ်းအိုမင်းနေတဲ့ အပြင်၊ ကျဉ်းမြောင်းကာ ပျဉ်ချပ်တွေလည်းတစ်ချိူ့ နေရာတွေမှာ
Hussaini Hanging Bridge is the most dangerous rope bridge in the world.
The bridge itself is very old, narrow and many wooden planks are missing.
It's situated in northern Pakistan.
ဓါတ်ကြိုးကိုသာ ကိုင်လိုက်ချင်တော့ တယ်...
Posted by Unknown | at 11:17 AM |0comments
Doctors baffled by man with enormous breasts
ရှက်လှချည့် ရွှေရင်အစုံ၊ အယ်စတုံ....
ခက်ဖွယ်ရယ်ကြုံ...ရှက်စဖွယ် အယ်စတုံကြောင့် ...
တရုတ်နိုင်ငံ၊ဘေဂျင်းမြို့ ရှိ ၇င်ခေါင်းပိုင်းဆိုင်ရာအထူးကုဆေးခန်းသို့အသက် ၅၃ နှစ်အရွယ်ရှိ နို့ ထွက်
တိရိစ္ဆာန်များမွေးမြူရေးခြံပိုင်ရှင်အမျိူးသား လယ်သမားတစ်ဦးလာရောက်လာ ကုသမှုခံယူခဲ့ ရာ ၎င်း၏အ
ရွယ်ပမာဏ အလွန်ကြီးမားသော ရင်သားတစ်စုံကြောင့် ဆရာဝန်များအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးရင်သား
ပိုင်ရှင်အမျိူးသားကိုတွေ့ ရှိခဲ့ ရပြီဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အဆိုပါအမျိူးသား ဟာသူနေထိုင်တဲ့ ရွာမှာပင် လူတွေက သူ့ ရဲ့ ကြီးမားလှတဲ့ ရင်သားတွေကိုလက်ညှိုး
ထိုးလှောင်ပြောင်ရယ်မောနေကြတာမို့ သူ့ အနေနဲ့ အလွန်ပူပြင်းတဲ့ ရာသီမှာတောင်မှ ထိုရွှေရင်အစုံ အယ်
စတုံကြီးကို ၀ှက်ထား၊အုပ်မိအောင် ကုတ်အင်္ကျီအထူကြီးဝတ်ဆင်နေရရှာပါတယ်...
ရတာမလို...လိုတာမရ ...လူ့ လောက...
Guo Feng အမည်ရှိ အဆိုပါအမျိူးသားက " လွန်ခဲ့ တဲ့ ၁၀ နှစ်ကတည်းက ကျွန်တော့် ရဲ့ ရင်သားက
ကြီးမားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်...ဒါပေမယ့် အဲဒီတုံးက လူကလည်းဝလာတာမို့ သတိသိပ်မထားမိခဲ့ ပါ
ဘူး...လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်က စပြီး မခံမရပ်နိုင်အောင်ဖြစ်လာခဲ့ ရပြီး ကျွန်တော်လည်းဆေးရုံတွေ
တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းကုနေတာအခုထက်ထိတော့ ဘယ်သူမှပျောက်အောင် မကူညီနိုင်သေးပါဘူး...
စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေအမျိူးမျိူးလုပ်ရလွန်းလို့ လည်းငွေတွေကုန်ပါပြီ...ဒါတောင်အခုအထိ ပျောက်မယ့် 
လက္ခဏာမရှိတဲ့ အပြင် ရွှေရင်အစုံကလည်းပိုလို့ သာကြီးလာနေပါတော့ တယ်...
ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ ကျွန်တော့် ရဲ့ အဖြစ်ဆန်းဟာ သူ့ တို့ အတွက်မကြုံစဖူး၊ အထူးအဆန်းလေ့ လာစ
ရာမို့တမင်သက်သက်များမပျောက်အောင် မကုသပေးတာလားလို့ တောင် တစ်ခါတစ်လေ တွေးမိပါ
တယ်..." လို့ သူကပြောပြပါတယ်...
အကယ်၍များ မည်သူကမျှသူ့ ရဲ့ ဒုက္ခကို ကယ်တင်မပေးနိုင်ခဲ့ ရင်တော့ သူ့ ကိုယ်တိုင်သာ အဆိုပါရင်
သားအစုံကို ဖြတ်ပစ်မိတော့ မှာမို့ထိုသို့ မပြုလုပ်ခင် ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ တစ်ခုခုတော့ဆောင်ရွက်
သို့ သော်လည်းဆရာဝန်များကတော့ ၎င်းတို့ အနေနဲ့ ထိုပြဿနာရဲ့ ဇစ်မြစ်၊အကြောင်းရင်းကို မသိရမ
" ကျွန်တော့် ရဲ့ အနှစ် ၃၀ ကြာ ရင်ခေါင်းပိုင်းဆေးကုသမှုသက်တမ်းမှာ ဒီလိုမျိူးတစ်ခါမျှ မတွေ့ ခဲ့ ရ
ပါဘူး..." လို့ ဒေါက်တာကျန်းလီလန် ကဆိုပါတယ်...
ဆေးရုံအကြီးအကဲ မစ္စတာဂေါင်ယောင်ဟုန် ကလည်း " ကျွန်တော်တို့ ဟာ လူနာအနေနဲ့ အဆိပ်သင့် 
တာတစ်ခုခုများစားသုံးမိခဲ့ လေသလာလို့ ထင်ခဲ့ ပါသေးတယ်...ဒါပေမယ့် သူ့ ရဲ့ သွေးကို စမ်းသပ်စစ်
ဆေးကြည့် တော့ လည်းအဲဒီလိုမဟုတ်ပဲ သံသယဖြစ်စရာဘာမှမတွေ့ ခဲ့ ရပါဘူး...
သူ့ ရဲ့ မျိူးရိုးဗီဇဆိုင်ရာတွေကလည်းပုံမှန်ပါပဲ...ဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့် တော့ လည်းကင်ဆာမဟုတ်ပါဘူး...
အဆီပြင် တစ်ရှူးတွေပဲဖြစ်ပုံရပါတယ်...ဒါကြောင့် နောက်ဆုံးတော့ ကမ္ဘာ့ သမိုင်းမှာ အမျိူးသားတစ်ဦး
ရဲ့ အကြီးမားဆုံးရင်သားတစ်စုံပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ သာ ကောက်ချက်ချထားရပါတော့ တယ်..." လို့ ဆိုခဲ့ 
သူ့ ဘ၀ကလည်း နို့ ထွက်မွေးမြူရေးခြံဆိုတော့ တိရိစ္ဆာများရဲ့ နို့ တွေကို မနေမနားညှစ်နေခဲ့ လို့ ချက်
ချင်းပဲ ဒီဘ၀မှာတင် ၀ဋ်လည်တာများလားလို့ တွေးမိပါတယ်...
Chinese doctors claim to have discovered the biggest case of man boobs in the world aftera53-year-old dairy farmer turned up ataspecialist chest clinic in Beijing. Doctor Zhang Lilan at the Jinan Chest Hospital said: "The man is in every way male except for his enormous breasts. He isafarmer and says they are extremely uncomfortable as he has to doalot of manual work and they get in the way of everything.
The man, 53-year-old Guo Feng, said: "About 10 years ago my chest started to get larger but I didn't think much of it as I was putting on weight all over - but in the last few years it's become unbearable and I have been from one hospital to the other with nobody able to help me.
"I have spent all my money on examinations and tests and am still no nearerasolution - in fact my breasts are now bigger than ever. I sometimes think the doctors don't want to help me with this because they find meamedical curiosity."
He says if no one can help him he will cut them off himself and has appealed for doctors to do something before that. But the doctors say they do not want to act until they have identified what the problem is.
Doctor Zhang Lilan added: "In 30 years of working as specialist here at the chest clinic I have never seen anything like it." Clinic boss Gaoyong Hong added: "We wondered if he had eaten any poisons or contaminants but have found nothing after testing his blood. His genetic material is also normal. We did an Xray. It is notacancer. It seems to be fatty tissue - at the most the best we can suggest is that it is the biggest case of man boobs ever."
Posted by Unknown | at 1:20 AM |3comments
Labels: news: austiantimes.com
Grandmother invents foolproof sewing needle
အဖွားရဲ့ စိတ်ကူးကောင်းနဲ့ ဖန်တီးလိုက်တဲ့ အပ်သစ်....
မျက်စေ့ မှိတ်ပြီးတော့ တောင် အပ်ချည်ထိုးလို့ ရတယ်...
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ မင်နီဆိုတာပြည်နယ်မှ အဖွားတစ်ဦးဟာ တုန်ယင်နေတဲ့ လက်အစုံနဲ့ မီးပျက်တဲ့ ည
များမှာတောင်မှ အလွယ်တစ်ကူအပ်ချည်ထိုးနိုင်မယ့် အပ်တစ်မျိူးကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့ လို့ အိမ်ရှင်မတွေရဲ့ ဘ
အခုတော့ အပ်ချည်ကြိုးရဲ့ အစ ကိုတံတွေးစွတ်ပြီးအပ်ပေါက်ထဲကို ၀င်ဖို့ ခက်ခဲပင်ပန်းစွာနဲ့ အံကြိတ်ကျိူး
စားနေရမယ့အစား အဖွား Pam Turner ရဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ တီထွင်လိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့ အပ်ကတော့ အ
ညံ့ ဆုံး အပ်ချူပ်သူ တောင်မှ အပေါက်မှားပြီးထိုးမိမှာ၊ အပ်ပေါက်ထဲအပ်ချည်မ၀င်မှာကို စိုးရိမ်စရာမလို
အဖွားရဲ့ ကြောင်လိမ် မျက်ကွင်း အပ်နဖားပုံစံသစ်မှာ အပ်ပေါက်ရဲ့ အ၀ဟာ ပွင့် နေမှာဖြစ်တဲ့ သံချေးမ
တက်တဲ့ သံမဏိသံအမျိူးအစား ( စတီး သံ ) အပ်ဖြစ်ပါတယ်...
အပ်ချည်ကြီးရဲ့ အ၀ိုက်ကိုအပ်ပေါ်မှာ လျှောချလှိမ့် ယူပြီး အပ်နဖားထဲကိုသွင်းလိုက်ရုံမျှဖြင့် အပ်ချည်ထိုး
သူမရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူအပ်ချည်နဲ့ အပ်ပေါက်ထိုးဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲပြုလုပ်နေရတာကိုတွေ့ ရပြီးနောက်ရာစုနှစ်
ပေါင်းများစွာ ပုံစံမပြောင်းပဲထုတ်လုပ်သုံးစွဲနေခဲ့ တဲ့ အပ် ကိုပုံစုံအသစ်ပြောင်းဖို့ စိတ်ကူးရခဲ့ တာဖြစ်ပါ
တယ်လို့အသက် ၅၇ နှစ်ရှိ ပြီဖြစ်တဲ့ အမျိူးသမီးကြီးက ပြောပြခဲ့ ပါတယ်....
တစ်ချောင်းကို ၃.၆၉ ပေါင်စတာလင် ( ၆ ဒေါ်လာ နီးပါး ) ကျသင့် တဲ့ သူမရဲ့ အပ်ပုံစံသစ်ဟာ စက္ကန့် 
ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အပ်ချည်ထိုးပြီး၊ အသင့် ချူပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး မျက်လုံးမှိတ်ပြီးအပ်ချည်ထိုးလို့ တောင်
ယခုပုံစံသစ်အပ်ကို မည်ကဲ့ သို့ ပြုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုတော့ အသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့ အဖွားက ငြင်းဆိုခဲ့ 
ပြီးသာမာန်အပ်တစ်ချောင်းလုပ်တာထက်တော့ ပိုမိုဆန်းပြားတဲ့ စက်ပစ္စည်းကိရိယာကို အသုံးပြုရတာ
ဖြစ်ပါတယ်လို့ တော့ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
စိတ်ကူးတစ်ချက်ကောင်းရုံနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကိုအကျိူးပြုကာ၊ ကိုယ်လည်းငွေအမြောက်အများဝင်ကာ ပွပေါက်
တိုးနိုင်တာမို့စာဖတ်သူများလည်း စိတ်ကူးကောင်းများဖြန့် ကျက်တွေးကာ မည်သူ့ မျှ မထင်ထားတဲ့ အ
သုံးဝင်ပစ္စည်း၊ နည်းပညာများကို တီထွင်ဖန်တီးနိုင်ပါစေ...
လောလောဆယ် ကိုပီတာက တော့ တွေးယင်းတွေးယင်း...
A grandmother from Minnesota has solved one of life’s most fiddly domestic tasks by inventingasewing needle that can be threaded by the clumsiest of hands.
Rather than having to painstakingly wet the end of the thread and pass it through the eye, Pam Turner’s design is foolproof for even the most inept of seamstresses. Her Spiral Eye invention isastainless steel needle withagap in the metal on one side of the eye
A loop of thread is draped over the needle and then pulled into the eye before being secured in the normal way. The 57-year-old said she was inspired to redesign the sewing needle, which has seen little change over the centuries, after watching her mother struggle threading the traditional style implement.
She claims that her needle, which costs £3.69, allows users to get sewing withinamatter of seconds and can be threaded with your eyes closed. She has refused to disclose her secret about how she made the needle, but admits that it takes more specialised equipment than the traditional needle-making process.
Posted by Unknown | at 1:39 AM |0comments
Fallen money bag sparks cash grab
ကောက်ကြမယ်ဟေ့...ကောင်းကောင်း....
အလကားပေးနေတယ်လို့ များမှတ်နေလေရော့ သလား...
အစောင့် အကြပ်နဲ့ လိုက်ပါစောင့် ရှောက်တဲ့ ငွေစက္ကူများသယ်ဆောင်လာတဲ့ ကားတစ်စင်းပေါ်က ငွေ
အိတ်တစ်အိတ်ပြုတ်ကျခဲ့ ပြီး လူတွေအလုအယက်နဲ့ ငွေတွေကောက်ယူခဲ့ ကြတာမို့ ဒေါ်လာငွေပေါင်း
သိန်းနဲ့ ချီပြီးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အိုဟိုင်ယိုပြည်နယ်မှ ရဲတပ်ဖွဲ့ ကပြောဆိုလိုက်
ကားပေါ်က အထုတ်တစ်ထုတ်ပြုတ်ကျလာပြီးပွင့် ထွက်ကာ ငွေတွေကျလာတိုမို့ လူတွေက ဒေါ်လာ ၂၀
ယခုအခါရဲများဟာ မိုဘိုင်းလ်ဖုံးများနဲ့ လျှိူ့ ဝှက်ကင်မရာများက ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများကို
ပြန်လည်ကြည့် ရှုစစ်ဆေးနေပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ငွေစက္ကူများကို ရရှိကောက်ယူသွားသူတွေကို စိစစ်
စုစုပေါင်း ဒေါ်လာတစ်သိန်းကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်...ထိုပမာဏနဲ့ ညီမျှတဲ့ ငွေကိုတော့ ရဲတပ်
ဖွဲ့ ကပြန်ရှာတွေ့ ထားပါတယ်...တာဝန်သိသိလာရောက်အပ်နှံတာက ဒေါ်လာ ၁၂၀၀၀ ပါ...
" ဒါဟာ အလကားပေးဝေတဲ့ ပိုက်ဆံမဟုတ်ပါဘူး...တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ ထိုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ငွေ
စက္ကူတွေနဲ့ အတူ လက်ဝယ်တွေ့ ရှိရလျှင် တရားစွဲဆိုခြင်းခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်...." လို့ ရဲတပ်ကြပ်ကြီး
ဒန်ကယ်လ်ဆို ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
လူတွေကိုယ်ကျင့် တရားဘယ်လောက်ချိူ့ တဲ့ နေကြပြီလည်းဆိုတာအထက်ပါသတင်းကိုကြည့် တာနဲ့ 
အစစအရာရာ ကမ္ဘာမှာတစ်ခြားနိုင်ငံအများစုထက်စာယင်ပြည့် စုံပါတယ်လို့ ဆိုနိုင်တဲ့ အမေရိကန်လို
နိုင်ငံမှာတောင် ကိုယ့် ပိုက်ဆံမဟုတ်ပဲ လမ်းမှာပြန့် ကျဲလွင့် ကျခဲ့ တဲ့ ငွေတွေကို ကောက်ယူပြီးထွက်
သွားကြတာ မနည်းပါပဲလား...တာဝန်သိသိလာအပ်တာ ဒေါ်လာ ၁၂၀၀၀ ၊ စုစုပေါင်းပျောက်ဆုံးနေတာ
ဒေါ်လာ တစ်သိန်းကျော် ဆိုတော့ ၁၀ ရာခိုင်နှုံးပဲ သစ္စာရှိတယ်လို့ ဆိုရမလိုဖြစ်နေပါတော့ တယ်...
Police in the US state of Ohio say tens of thousands of dollars are missingaday afterabag of cash fell from an armoured car, sparkingamoney grab.
A mad rush to pick up $20 bills broke out after the bag fell from the car in Columbus and split open.
It is unclear how much cash was in the bag, but US media say it was at least $100,000.
Officers are reviewing mobile phone and surveillance videos to identify who has the missing cash.
More than $100,000 (£67,000) is missing. But police were able to recover an equal amount and members of the public handed in $12,000.
"It's not free money," saidapolice sergeant. If people were found with the missing cash they would be charged, Sgt Dan Kelso said.
Posted by Unknown | at 1:02 AM |0comments
Labels: news: bbc.co.uk
Astonishing sculpture of church is carved... intoasingle grain of SAND
အနုစိတ်ပြီးသေးလွန်းလို့ သာမာန်မျက်စေ့ နဲ့ တောင်မမြင်နိုင်ပါဘူးတဲ့ ...
Micro view: Willard Wigan carved the St Bartholomew's church into this grain of sand and then put it in the eye ofaneedle. It's so small that it can't be seen with the naked eye
လက်ရာမြောက်အသေးစားပုံစံတူရုပ်ထုလေးများအား ထုဆစ်ပုံဖော်ဖန်တီးနိုင်သူပါရမီရှင်၊ ပန်းပုဆရာတစ်
ဦးဟာ အပ်နဖားပေါက်အတွင်းတွင် ထည့် ထားနိုင်လောက်အောင်သေးငယ်သည့်ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုး
ကျောင်းပုံတူအရုပ်ကလေးကို သဲမှုန့် ဖြင့် ပင်ရင်သပ်ရှုမော၊ အံ့ သြလောက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ လို့သဲ
တစ်ပွင့် နှင့် ပုံစံအမျိူးမျိူးပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သက်သေပြခဲ့ ပါတော့ တယ်...
အပြင်က တစ်ကယ့် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းလေးပါ...
The real thing: Mr Wigan's girlfriend lives at the bottom of this hilltop church and challenged her talented boyfriend to carveareplica of it fromasingle grain of sand
အသက် ၅၂ နှစ်အရွယ်ရှိ မစ္စတာ ၀ီလီယံ ၀ီဂန်ဟာ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား မိသားစု၊ လ မျက်နှာ
ပေါ်မှာ ခြေချနေတဲ့ အမေရိကန်အာကာသယာဉ်မှူး နေးလ်အမ်းစထရောင်း တို့ ရဲ့ ပုံစံတူ ပန်းပုရုပ်ကလေး
များအပါအ၀င် အလွန်သေးငယ်တဲ့ အရုပ်များကို အနုစိတ်ထုဆစ်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ လို့ နာမည်ကျော်ခဲ့ တာဖြစ်
သူ့ ကို ဂလောက်စက်စတာ နယ်၊ ချာ့ ခ်ျဒေါင်းအရပ်က Chosen တောင်ကုန်အနားမှာ နေတဲ့ သူ့ ရဲ့ ချစ်
သူရည်းစား ဆာရာဘလိတ်က အဲဒီတောင်ကုန်းထိပ်မှာ တည်ရှိတဲ့ စိန့် ဘာသာကလလိုမြူး ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
ရဲ့ ပုံစံတူ အရုပ်ကလေးကို ပြုလုပ်နိုင်ပါ့ မလားလို့ စိန်ခေါ်ခဲ့့တာဖြစ်ပါတယ်.....
( အဲဒါကြောင့် ပုံစံတုအရုပ်ကလေးကိုဖန်တီးခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...)
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားတို့ မိသားစု ပုံစံတူအရုပ်ကလေး...
ရွှေနဲ့ လုပ်တဲ့ အပ်ကလေးရဲ့ နဖားပေါက်ထဲမှာထွင်းထုထားတာပါ...
First family: Last year, Mr Wigan created this micro-sculpture of the Obamas, carved into the eye ofa24-carat gold needle
အရုပ်ကလေးဟာ အလွန်ပဲသေးငယ်လွန်းတာမို့ သာမာန်မျက်စေ့ ဖြင့် ကြည့်လို့ မမြင်နိုင်ပါဘူး...
" ကျွန်တော် အဲဒီဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုကြည့် လိုက်ပြီးရှုခင်းနဲ့ တော်တော်လှတာပဲလို့ တွေးမိပါတယ်...
ပြီးတော့ ချစ်သူ ကလည်း ကျွန်တော့် ကိုအဲဒီဘုရားကျောင်းပုံစံတူ အရုပ်ကလေးမလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ ပြော
နေပါတယ်...ဒါနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်...
အဲဒီအရုပ်ကလေးကိုပြုလုပ်ဖန်တီးတာ ရက်သတ္တပါတ်ခြောက် ပါတ်လောက်ကြာခဲ့ ပြီး အားလုံးကိုအချိူး
အစားကျအောင်ဖန်တီးရတာမို့တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲ ပြုလုပ်ခဲ့ ရတာဖြစ်ပါတယ်..." လို့ သူကပြောပြ
Talented: Mr Wigan started working on small sculptures asaboy
မစ္စတာဝီဂန် ဟာထိုလက်ရာမြောက်အနုစိတ် ပစ္စည်းလေးကိုမှန်စကလေးတွေကို အပ်ကလေးနဲ့ ထိကပ်
ကိုင်တွယ်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့ ရတာဖြစ်ပြီး သူ့ ရဲ့ မျက်တောင်မွေးတစ်ပင်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ စုတ်တံတစ်ခုကိုလည်း
" တစ်ချက်လေးမှားတာနဲ့ ဆက်ပြီးလုပ်လို့ မရတော့ ပါဘူး... ကျွန်တော်ကတော့ ဒီအရုပ်ကလေးကိုတတ်
နိုင်သလောက် အသေးစိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...အရောင်ပါတဲ့ ပြတင်းပေါက်မှန်ကလေးတွေပါ တပ်
ဆင်ထားပါသေးတယ်...ပုံစံတူအရုပ်တစ်ခုလုံးရဲ့ အရွယ်အစားဟာ သတင်းစာမှာပါတဲ့ full stop ( ၀ါကျ
အဆုံး အမှတ်အသား ) အရွယ်အစားပဲရှိပါတယ်...အတော့် ကိုခဲယဉ်းပင်ပန်းစွာနဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့ ရလို့ ကျွန်
တော့် ဖြင့်ရူးမတတ်လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ ရပါတယ်..." လို့ သူက ရှင်းပြခဲ့ ပါတယ်...
အင်မတန်မှသေးငယ်တဲ့ အရာဝတ္တုပစ္စည်းလေးတွေပြုလုပ်ဖန်တီးတဲ့ အခါမှာတော့ နဲနဲလေးအားစိုက်မိ
ပြီးအရှိန်လွန်သွားတာနဲ့ ပြဿနာဖြစ်တော့ တာပါပဲ...ကျွန်တော်ဟာတစ်ခါတစ်ရံအသက်ရှူလိုက်တာနဲ့ 
တင်ဖန်တီးပြုလုပ်နေတဲ့ အရုပ်ကလေးတွေ နှာခေါင်းထဲကိုတောင်ဝင်သွားခဲ့ တာဖြစ်ခဲ့ ဖူးပါတယ် လို့ 
ဘာမင်ဟန် အရပ်မှာနေထိုင်တဲ့ မစ္စတာဝီဂန်ဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းကကျောင်းနေရတာ မပျော်ပဲစိတ်
ညစ်နေခဲ့ လို့ ပန်းခြံထဲမှာ ပုရွက်ဆိတ်တွေအတွက် အိမ်သေးသေးလေးတွေ ဆောက်ပေးပြီး စိတ်သက်
သာရာရအောင် နေခဲ့ ရာကစပြီး အလွန်သေးငယ်တဲ့ အရာဝတ္တုပုံစံလေးတွေကိုပြုလုပ်ဖို့ စိတ်ပါခဲ့ တာဖြစ်
သူဒီလိုလုပ်နေခဲ့ တာကို သူ့ ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကတွေ့ သွားပြီး ချီးမွန်းခဲ့ တာကြောင့် ထိုသို့ ပြုလုပ်ဖန်တီးရ
တာကိုစွဲလမ်းနှစ်သက်ခဲ့ ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ ပြောင်းလဲခဲ့ တာပါ...
ကျွန်တော့် ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူက အရာဝတ္တုတွေသေးနိုင်သလောက်သေးအောင်ဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်လေ၊ ကျွန်
တော်ဟာ နာမည်ကြီးသထက်ကြီးလာတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့် မယ် လို့ ပြောခဲ့ တယ်လို့ သူက
အခုလို အနုစိတ်လက်ရာလေးတွေကိုပြုလုပ်နေရတာကိုက သူ့ ရဲ့ စွဲလမ်းမှုဖြစ်ပြီး၊ နောင်တစ်ချိန်မှာတော့ 
ဂလောက်ဆက်စတာ မှာ ထိုလက်ရာများကို ပြပွဲတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်လိမ့် မယ်လို့ သူက မျှော်လင့် ထားပါ
အရင်ကလည်း ဒီလို မျိူးအလွန်သေးတဲ့ အရုပ်ကလေး ( အဲဒါကတော့ အပ်နဖားပေါက်ထဲက ကျားရုပ်
ကလေးဖြစ်ပါတယ်...) အကြောင်းသတင်းတစ်ပုဒ်တင်ခဲ့ ပါသေးတယ်...
A talented micro-sculptor has proven you really can see the world inagrain of sand - after carving this incredible church fromasingle granule that fits inside the eye ofaneedle.
William Wigan, 52 madeaname for himself by sculpting tiny recreations of everything from Barack Obama and his family, to Neil Armstrong on the moon's surface.
He was challenged by his girlfriend Sarah Slade, who lives at the foot of Chosen Hill in Churchdown, near Gloucester, to sculpt the hilltop parish church St Bartholomew's.
And he has achieved it withamodel so small it cannot be seen by the naked eye.
'I looked at the church and thought it was wonderful,' said Mr Willard.
'Rachel said "I bet you couldn't do it" and every time I saw it I was fascinated. Finally I thought "yes, I could do it".
'It took about six weeks and it was very difficult because I had to get my proportions right.'
Mr Willard uses tiny shards of glass stuck toaneedle, andabrush made from one of his eyelashes to create his minute masterpieces.
'If I madeamistake it would have been impossible to fix. I wanted to put in as much detail as I possibly could.
'I put in some stained glass windows. The whole sculpture us the size ofafull stop inanewspaper. It's quite painstaking, in fact it was driving me insane.
'When you're working on something so small it causesaproblem if you apply too much pressure.
'And I've made things so small in the past that I've sometimes inhaled it.'
Mr Willard, from Birmingham, started working on small sculptures asaboy when, unhappy at school, he retreated toafantasy world and made homes for little ants in the garden.
His mother saw them and praised him for his work, startingapassion that would turn intoacareer.
He said: 'She told me that the smaller my work, the bigger my name would be.'
Mr Willard says work of this scale is his passion and hopes to arrange an exhibition in Gloucestershire in the future.
Posted by Unknown | at 1:19 AM |0comments
Global warming resolves island dispute
အိန္ဒိယနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ ရ်ှနိုင်ငံအကြားနှစ်ပေါင်း ၃၀ တိုင်အောင်ပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားနေခဲ့ ရသောကျွန်း
တစ်ကျွန်းဟာ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့် မြင့် တက်လာတဲ့ ဒီရေအောက်မှာ နစ်မြုပ်သွားခဲ့ ပါပြီ...
ပင်လယ်ပြင်ကင်းထောက်တပ်ဖွဲ့ များရဲ့ လေ့ လာမှုများနှင့် ဂြိုလ်တုမှပေးပို့ တဲ့ ဓါတ်ပုံများအရ ဘင်္ဂလား
ပင်လယ်အော်အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့New Moore ကျွန်းဟာ လုံးဝကို စုန်းစုန်းမြုပ်သွားခဲ့ ရပြီဖြစ်တယ်
လို့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံထုတ်၊ ဒေလီတယ်လီဂရပ်ဖ် သတင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့ ပါသည်...
အိန္ဒိယနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ ရှ် နှစ်နိုင်ငံစလုံးက အလျား ၂ မိုင် အကျယ် ၁.၅ မိုင်ရှိတဲ့ လူသူမနေတဲ့ ကျွန်းကို
ပိုင်ဆိုင်ကြတယ်လို့ အခိုင်အမာဆိုနေခဲ့ ကြပါသည်...ဘင်္ဂလားဒေ့ ရ်ှနိုင်ငံကတော့ ထိုကျွန်းကို တောင်ပိုင်း
" အခုတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ နှစ်နိုင်ငံစလုံး ပြောဆိုဆွေးနွေးအဖြေရှာလို့ မရ တဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကို ကမ္ဘာ
ကြီးပူးနွေးလာနေမှု ကဖြေရှင်းပေးလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်..." လို့ ကာလကတ္တားမြို့ ၊ ဂျာဒက်ဗ်ပါး တက္က
သိုလ်ရဲ့ ပင်လယ်သုမဒ္ဒရာဆိုင်ရာ၊ အာဏ၀ါဗေဒ ပါမောက္ခ ဆူဂတာဟာဇရာ ကပြောကြားခဲ့ ပါသည်...
ထိုတက္ကသိုလ်မှ သိပ္ပံပညာရှင်များအနေနဲ့ လွန်ခဲ့ တဲ့ ဆယ်နှစ်အတွင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ ပင်
လယ်ရေမျက်နှာပြင်ဟာ ထိတ်လန့် စရာကောင်းတဲ့ နှုံးထားနဲ့ ကိုတိုးတက်မြင့် မားလာနေခဲ့ တာပါလို့ 
ထိုကျွန်းနဲ့ အနီးအနားကကျွန်းဖြစ်တဲ့လိုဟာချာရ ကျွန်းဟာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ ရေအောက်ကိုနစ်မြုပ်ခဲ့ 
လို့ ကျွန်းပေါ်မှာ နေထိုင်သူများကို ကုန်းပေါ်သို့ ပြောင်းရွေ့ ပေးခဲ့ ရပါတယ်...
ဂိုရမ်မာရ အမည်ရှိကျွန်းဟာလည်းတစ်ဝက်ခန့် နစ်မြုပ်ကာ ရေအောက်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း အဆို
ပါ ပညာရှင် မစ္စတာဟာဇရာ ကပြောခဲ့ ပါသည်...
အနည်းဆုံးအခြား ကျွန်းပေါင်း ၁၀ ကျွန်းဟာလည်း နစ်မြုပ်ရတော့ မည့် အခြေအနေနှင့် ရင်ဆိုင်နေရ
လူဦးရေ သန်း ၁၅၀ ရှိတဲ့ မြေနိမ့် ၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ ရ်ှနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာကြီး
ပူနွေးလာနေမှုကြောင့် ( ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့် တက်ကာ နိုင်ငံရဲ့ ကျွန်းများ၊ မြေမျက်နှာပြင်များ )
ရေအောက်ကိုရောက်ရှိနစ်မြုပ်မယ့် ဒါဏ်ကို အဆိုးဝါးဆုံးခံနေရတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်...
တစ်ခြားဘာမှမလုပ်သေးခင် ခြံစည်းရိုးလေးတော့ လုံအောင်ကာပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
အဲဒီမောင်တွေ ပြေးစရာမြေမရှိယင်၊ ရှိတဲ့ ဆီကိုလာမှာ အသေအချာပါခင်ဗျာ...
An island that has been at the centre ofa30 year dispute between India and Bangladesh has disappeared beneath rising seas.
Sea patrols and satellite pictures reveal New Moore Island in the Bay of Bengal is now completely submerged, reports the Daily Telegraph.
India and Bangladesh both claimed the uninhabited island, which was about2miles long and 1.5 miles wide. Bangladesh referred to the island as South Talpatti.
"What these two countries could not achieve from years of talking, has been resolved by global warming," said Sugata Hazra, professor of oceanography at Jadavpur University in Calcutta.
Scientists at the university have noted an alarming increase in the rate at which sea levels have risen over the past decade in the Bay of Bengal.
Another nearby island, Lohachara, was submerged in 1996, forcing its inhabitants to move to the mainland, while almost half of Ghoramara island was underwater, Mr Hazra added.
At least 10 other islands in the area were at risk. Bangladesh,alow-lying delta nation of 150 million people, is one of the countries worst-affected by global warming.
Posted by Unknown | at 11:02 AM |2comments
Feard Mosquito Can be Flying Vaccinator...
ငှက်ဖျားရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမည့် ခြင်မျိူးစိတ်သစ် ....
ခြင်မျိူးဆက်သစ်ကြောင့် ငှက်ဖျားရောဂါကြောက်ဖို့ မလိုတော့ ပြီ...
( သို့ သော် လာမည် ...ကြာမည်....)
တစ်နေ့သင့် ကိုလာကိုက်သောခြင်က ငှက်ဖျားရောဂါကာကွယ်နိုင်တဲ့ ပဋိဇီဝ ဓါတ်တွေကိုသင့် ခန္ဓာ
ကိုယ်ထဲသို့ ထိုးသွင်းပေးလိမ့် မည်ဟုဆိုလျှင် သင်ယုံနိုင်မည်လား....
ဂျပန်နိုင်ငံမှ သုတေသီပညာရှင်များက လူသားများကို အသက်အန္တရယ်ဖြစ်စေနိုင်လောက်သော ငှက်ဖျား
ရောဂါပိုးများသယ်ဆောင်သည့်၊ လူ့ ခန္ဓာကိုယ်မှ သွေးများစုတ်ယူတတ်သည့် ခြင်များသည် တစ်နေ့ နေ့ 
တစ်ချိန်ချိန်တွင် ထိုရောဂါပိုးများကိုကာကွယ်ပေးသည့် ဓါတ်ပြန် ပဋိဇီဝဆေးများ ဖြန့် ဖြူးနိုင်ပြီး လူသားသန်း
ပေါင်းများစွာကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးကာ အဆိုပါငှက်ဖျားရောဂါဆိုးမှကာကွယ်ပေးနိုင်စေလိမ့် မည်ဟု မျှော်
လူအများရွံရှာမုန်းတီး၊ကျိန်ဆဲနေကြသည့် အဆိုပါခြင်များကို မျိူးရိုးဗီဇဆိုင်ရာမျိူးစိတ်သစ်အဖြစ် ကူးပြောင်းမျိူး
စပ်ပြီး ပျံသန်းဖြန့် ဖြူးပေးနေသည့် ကာကွယ်ဆေးထိုးသည့် တိရိစ္ဆာန်များအဖြစ်ပြောင်းလဲစေနိုင်လိမ့် မည်ဟု
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိူမြို့ မြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည့်Jichi ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်မှ သိပံ္ပပညာရှင်များ၏
လေ့ လာစမ်းသပ်၊ သုတေသနပြုလုပ်ချက်များအရ သိရပါတယ်...
Leishamaniasis လို့ ခေါ်တဲ့ သဲဖြုတ် ( ခြင်ကဲ့သို့ တိရိစ္ဆာန်တစ်မျိူး ) တစ်မျိူးကြောင့် ဖြစ်ပွားတဲ့ လူကိုအသက်
အန္တရာယ်ဖြစ်စေလောက်တဲ့ ပြင်းထန်သည့် အရေပြားရောဂါတစ်မျိူးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သော ပရိုတိန်းဓါတ်
တစ်မျိူးပါဝင်တဲ့တံတွေးဂလင်းများထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ခြင်မျိူးစိတ်သစ်တစ်ခုကို အဆိုပါဂျပန်သုတေသီပညာ
ရှင်များက စမ်းသပ်မျိူးပွားနိုင်ခဲ့ ကြပါတယ်...
ထိုမျိူးစပ်ပေါက်ဖွားထားတဲ့ ခြင်အကိုက်ခံရတဲ့ ကြွက်မှာ အဆိုပါ အရေပြားရောဂါကို ခုခံ၊ ကာကွယ်နိုင်စေတဲ့ 
ပဋိဇီဝဓါတ်များဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ တဲ့ အတွက်ကြောင့် ထိုရောဂါမဖြစ်စေနိုင်လောက်အောင် ရောဂါပြီးစေပါတယ်
လို့ထိုသုတေသနပြုလေ့ လာစမ်းသပ်မှုကိုဦးဆောင်တဲ့ တွဲဖက်ပါမောက္ခ Shigeto Yoshida ကဆိုပါတယ်...
( ဒီလိုစမ်းသပ်အောင်မြင်မှုကြောင့် ) ခြင်များကို အလားတူစွာ ငှက်ဖျားရောဂါ ကာကွယ်တိုက်ဖျက်နိုင်ရန်အ
သုံးချသွားနိုင်တော့ မှာဖြစ်ပါတယ်....အဲဒီလိုဖြစ်လာဖို့ အချိန်ကာလအနေနဲ့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်တော့ 
ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါလိမ့် မယ် လို့ အဆိုပါ ငှက်ဖျားရောဂါဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်က ဆိုပါတယ်...
" ဒီလေ့ လာချက်ရဲ့ အားသာချက်က ရောဂါကာကွယ်ဆေးအတွက် ငွေကုန်ကြေးကျ ဖြစ်ဖို့ မလိုပါဘူး...သင့် အ
နေနဲ့ ဘာမှသတိမထားမိပဲနဲ့ ကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသားဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်...ဘာဆေးမှလည်း လိုအပ်မှာ
မဟုတ်သလို၊ သင့် အနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာမှာ လူစုလူဝေး၊ လူအုပ်ကြီးနဲ့ အတူ သွားပြီးဆေးထိုးခံနေ
ခြင်အကြိမ်ကြိမ် အကိုက်ခံရလေ သင့် ရဲ့ ရောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်းတိုးလေပဲဖြစ်ပါတယ်..." လို့ မစ္စတာယိုရှီဒါ
က အေဖက်ပီ သတင်းဌာနကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ က တယ်လီဖုန်းဖြင့် ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ယခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခက်အခဲကတော့ ငှက်ဖျားရောဂါကိုတိုက်ဖျက်တဲ့ (ဆေး) ဓါတ်ပစ္စည်းဟာ ရော
ဂါခံနိုင်စွမ်းကို အကြိမ်ကြိမ်၊ လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲစေတတ်တဲ့ အတွက် ထိရောက်တဲ့ ကာကွယ်၊ကုသဆေးမ
ဒါပေမယ့် အရှိန်အဟုတ်နဲ့ တိုးတက်နေတဲ့ သိပံ္ပနည်းပညာကြောင့် ထိုပြဿနာအတွက်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု
ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး ထိုမျိူးစိတ်သစ်ခြင်ဟာ ဖွံ့ ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများကို အဓိက ဒုက္ခပေးနေတဲ့ ရောဂါဆိုး ( ငှက်ဖျားရော
ဂါ ) ကို လုံးဝပပျောက်အောင်ကူညီစွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့် မယ်လို့ မစ္စတာ ယိုရှီဒါက မျှော်မှန်းထားပါတယ်....
အဓိကအားဖြင့် အာဖရိကနဲ့ အာရှဒသမှာ နှစ်စဉ်လူပေါင်းတစ်သန်းခန့် ငှက်ဖျားရောဂါကြောင့် သေဆုံးနေရ
ပြီး အများစုကတော့ ကလေးသူငယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် လို့ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ကြီးရဲ့ အဆိုအရသိရပါတယ်...
ငှက်ဖျားရောဂါကာကွယ်၊ ကုသဆေးတွေအမျိူးမျိူးရှိနေပေမယ့် လည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့ တော့ မည်သည့် 
ဒီစမ်းသပ်ချက်အောင်မြင်အောင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပြီး ငှက်ဖျားရောဂါပြီးစေတဲ့ ဓါတ်ပြန်ပစ္စည်းထုတ်
ပေးနိုင်တဲ့ ခြင်မျိူးစိတ်သစ်ကိုမျိူးပွားနိုင်ယင်တော့ အဆိုပါဂျပန်သုတေတီပညာရှင်ကို ဆေးပညာနိုဘယ်ဆု
Japanese researchers hope one day to turn blood-sucking mosquitoes -carriers of deadly malaria -into deliverers ofavaccine that could instead inoculate millions for free.
A new study shows real promise for turning the reviled insects into heroes by genetically modifying them to make them “flying vaccinators“, according to scientists at Jichi Medical University north of Tokyo.
Similarly the mosquitoes could be used to help combat malaria, perhapsadecade from now, said the malaria expert. “What's good is that they don't charge you for vaccinations,“ Yoshida told AFP by telephone on Wednesday.
“You would be vaccinated without even noticing. You wouldn't need any drug and you wouldn't need to show up atadesignated place for mass vaccinations.“
For nowaproblem is that no effective vaccine exists, because malaria's antigen, which triggers immune reactions, changes frequently.
However, Yoshida expects science will come up withasolution, and that the transgenic mosquito will ultimately help rid the developing world ofadeadly scourge.
Nearly one million people die each year from malaria -most of them children -predominantly in Africa and Asia, according to the World Health Organisation.
There are several anti-malarial drugs, none of them universally effective, andatreatment, called artemisinin.
Posted by Unknown | at 12:10 AM |0comments
Labels: News: Khaleej Times
Boy with 15 fingers and 16 toes to have surgery
တရုတ်နိုင်ငံမှကမ္ဘာ့ စံချိန်တင် လက်ပွား၊ခြေပွား ကလေး ခွဲစိတ်မှုခံယူရမည်...
လက်ချောင်း စုစုပေါင်း ၁၅ ချောင်း...
တရုတ်နိုင်ငံမှ ကလေးငယ်တစ်ဦးဟာ ခြေချောင်းလက်ခြောင်းစုစုပေါင်း ၃၁ ချောင်းနဲ့ ကမ္ဘာ့ စံချိန်ဝင်သွား
ခဲ့ ပြီးယခုအခါမှာတော့ သူ့ ရဲ့ အပိုခြေချောင်းလက်ချောင်းတွေကို ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားမှုခံယူရတော့ မှာဖြစ်ပါ
ခြေချောင်းလေးတွေက စုစုပေါင်း ၁၆ ချောင်း...
တရုတ်နိုင်ငံ၊ အရှေ့ မြောက်ပိုင်း လျောင်နင်းပြည်နယ်၊ ရှန်ယန်းမြို့ ကလေးက အသက် ၆ နှစ်အရွယ်ရှိ
ကောင်ကလေးမှာ ခြေချောင်း ၁၆ ချောင်းနဲ့ လက်ချောင်း ၁၅ ချောင်း၊ စုစုပေါင်း လက်၊ခြေ ၃၁ ချောင်း
ရှိပါတယ်...( သူ့ ရဲ့ ဘယ်လက်မမှာတော့ နှစ်ချောင်းပူးနေပြီး ခက်ရင်းပုံ လက်ပွားလေးဖြစ်နေပါတယ်...)
လက်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာတော့ လက်ချောင်းလေးသုံးချောင်းဟာ ပူးနေပါသေးတယ်...
လက်ရောခြေရောစုစုပေါင်းတော့၃၁ ချောင်းပါတဲ့ ....
အခုအရေအတွက်အရ သူလေးဟာ လက်ရှိကမ္ဘာ့ လက်ချောင်း၊ခြေချောင်းအများဆုံးစံချိန်ဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယ
နိုင်ငံမှ ကလေးငယ်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Pranamya Menaria နှင့်Davendra Harne တို့ နှစ်ဦးဆီမှာ အသီး
သီးရှိတဲ့ လက်ချောင်း ၁၂ ချောင်းနဲ့ ခြေချောင်း ၁၃ ချောင်း၊ စုစုပေါင်း ၂၅ ချောင်း စံချိန်ကို ၃၁ ချောင်းဖြင့်
ဒါကတော့ လက်ချောင်းလေးများ X- ray ပါ...
ဒါကတော့ခြေချောင်းလေးများ X-ray ပါ....
A boy in China who has 31 fingers and toes -aworld record - is to undergo surgery to remove the extras digits.
The 6-year-old boy, from the city of Shenyang in China's northeastern Liaoning province, hasatotal of 31 fingers and toes - 16 toes, and 15 fingers (although one of those fingers is incomplete, beingafork at the end of the right thumb.) Three fingers on each hand are fused together. That beats the current world record of 25, held jointly by two Indian children, Pranamya Menaria and Devendra Harne, who both have 12 fingers and 13 toes.
Posted by Unknown | at 11:10 PM | 1 comments
Labels: news: metro.uk
အခုတစ်လော အင်တာနက်စာမျက်နှာများနဲ့ လေလှိုင်းများမှာ အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ တိုက်ခတ်နေတဲ့ 
တွဲရေးခွဲရေး ပြဿနာများကြောင့်ကိုပီတာလည်း တော်တော်ဦးနှောက်ခြောက်နေရပါတယ်...
လူအမျိူးမျိူးစိတ်အထွေထွေရှိကြတယ်ဆိုပေမယ့်ကိုယ်လေးစားတဲ့ သူ၊ နာမည်ကျော်ကြား၊ ထင်ရှား
တဲ့ သူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်၊အယူအဆတွေကိုလည်း တွေ့ မြင်ဖတ်ရှုကြားသိနေရပါတယ်...
နိုင်ငံရေးဆိုတာကို ပုတ်လောက်ကြီးရေးပြတာတောင်မှ မှုံဝါးဝါးသာမြင်နိုင်လောက်တဲ့ ဗဟုသုတရှိသူ
မို့ လည်း လေးစားလောက်တဲ့ သူတွေရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို တတ်နိုင်သလောက်လေ့ လာနေမိ
ဒါကြောင့် အမျိူးမျိူးသော ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ အယူအဆတွေဖတ်ရှုနားထောင်ပြီး...
မျက်စေ့ စုံမှိတ်ပြီး သူ့ တစ်ယောက်ကိုပဲထောက်ခံတော့ မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်...
အားလုံးလည်း လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်နိုင်ပါတယ်...
*** ဘယ်သူမှ ပေးထားတဲ့ ကတိမတည်ပါ...
*** ဘယ်သူမှလည်းပြည်သူတွေခံစားနေရတာတွေကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ နားမထောင်ပါ...
*** ဘယ်သူမှလည်း ဆင်းရဲချိူ့ တဲ့ ပြီး ၊ အလုပ်အကိုင်မဲ့ နေသူတွေကို မကူညီကြပါဘူး...
*** ဘယ်သူမှ အာဏာရသွားယင် ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်ကြတော့ ပါဘူး...
*** ဘယ်သူမှလည်း အမှန်ကိုပြောကြတာမဟုတ်လေတော့ ...
*** ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ကတော့ ....
Posted by Unknown | at 2:21 AM |3comments
Chinese video gamer survives being stabbed through the head after cheating row
ဦးခေါင်းကို ဓါးဖြင့် ထုတ်ချင်းပေါက်ထိုးစိုက်ခံရသည့် တိုင် အသက်မသေသူ ဂိမ်းသမား....
ကြောက်စရာ့ ဓါးချက် ...ဓါတ်မှန်ပုံ...
ကွန်ပြူတာဂိမ်းကစားယင်း အငြင်းပွားပြီးနောက် ၁၀ လက်မအရှည်ရှိသော ဓါးဖြင့်ဦးခေါင်းကိုအထိုးခံခဲ့ 
ရသည့် ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်လေးတစ်ဦး၏ ဓါတ်ပုံကိုမြင်ရသူတိုင်းအတွက်တော့ အလွန်ထူးဆန်းအံ့ 
ထိုလူငယ်လေးဟာ အခင်းဖြစ်ပွားချိန်မှာ အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် Counter-Strike ဂိမ်း ကစားနေ
ခဲ့ သည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံမှ သတင်းများကဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်...
တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ မြောက်ပိုင်း ကျီလင်ပြည်နယ်၊ မီရှားကျည် မြို့ ကလေးမှ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်ရှိ
ရှောင်ဝေ အမည်ရှိတဲ့ လူငယ်ဟာ ဦးခေါင်းကိုဓါးနဲ့ အထိုးခံရပြီး၊ ဓါးစိုက်လျက်နှင့် ပင် သူ့ ရဲ့ သူငယ်ချင်း
များရဲ့ အကူအညီနဲ့ ကျီလင် တက္ကသိုလ် တွဲဖက်ဆေးရုံ ( အမှတ် ၂ ) သို့ ပင်လမ်းလျှောက်ပြီးရောက်လာ
စကေဘာ ( ဓါးချွန် ) ဟာ ရှောင်ဝေရဲ့ ဝဲဘက်နားထင်ကနေထိုးသွင်းလိုက်တာ လက်ကိုအရင်းအထိစိုက်
နေခဲ့ ပြီး သူ့ ရဲ့ လက်ယာဘက် ( ညာဘက် ) နားထင်ကနေအပြင်ကို ၁ စင်တီမီတာလောက်ပေါက်ထွက်
" ကောင်လေးရဲ့ မျက်နှာတစ်ခုလုံးသွေးတွေဖုံးလွှမ်းနေတာတောင်မှ သူဟာ သတိရှိနေဆဲပါပဲ..." လို့ ဆေး
ရုံရဲ့ အာရုံကြောခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ပါမောက္ခ ယန်ရှီကျွမ်း ကပြောပါတယ်...
၀မ် နဲ့ သူ့ ရဲ့ သူငယ်ချင်း ဟွမ် တို့ ဟာ အဆိုပါ Counter- Strike ဂိမ်းကိုကစားနေခဲ့ ပြီး သူတို့ နှစ်ဦးအ
တွဲဟာ ကစားပွဲထဲက ရန်သူအားလုံးနီးပါးကို နှိမ်နင်းအောင်မြင်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ကျွန်တော်တို့ ကစားနေတုံး ဆိုင်ထဲကပဲ အခြားလူတစ်စုရောက်လာပြီး ဒီကစားပွဲမှာ အနိုင်ရချင်ယင် ဆော့ ဖ်ဝဲ တစ်ခုထည့် သွင်းရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်...အဲဒီမှာပဲ ကျွန်တော်တို့ နဲ့ စကားများကြတော့ တာပါ
ပဲ လို့ အသက် ၁၈ နှစ်ရှိ ဟွမ်က ဆိုပါတယ်...
ဝေ နဲ့ဟွမ် ကို အင်တာနက်ဆိုင်ထဲကနေ ဆွဲထုတ်ပြီး အပြင်မှာပဲ မြေပေါ်မှာလဲကျတဲ့ အထိဝိုင်းဝန်းထိုး
" ကျွန်တော့် ရဲ့ ဘယ်ဖက် လက်မောင်းဟာလည်း သူတို့ တစ်တွေဓါးနဲ့ ထိုးတာခံခဲ့ ရပါတယ်...အဲဒီနောက်
သူတို့ အားလုံးထွက်ပြေးသွားခဲ့ ကြပါတယ်... ဝေ ကိုလည်း သူ့ ရဲ့ ခေါင်းမှာဓါးစိုက်နေပြီးမြေပေါ်မှာ လဲနေ
တာတွေ့ လိုက်ရပါတော့တယ်..." လို့ ဟွမ်ကပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
ဝေ ဟာ ကစားပွဲမှာအောင်နိုင်ဖို့ အတွက် ကုဒ်နံပါတ်တစ်ခုကို လိမ်လည်လှည့် ဖျားပြီးသုံးခဲ့ လို့ ကစား
နည်းမှာ နံရံတွေကိုထွင်းဖောက်မြင်နိုင်ပြီးရန်သူတွေကိုအလွယ်တစ်ကူတွေ့ မြင် သုတ်သင်နိုင်ခဲ့ တယ်
လို့ သူ့ ရဲ့ ကစားပြိုင်ဖက်တွေက စွပ်စွဲခဲ့ ပါတယ်...
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကတော့သူ့ ရဲ့ ဆေးကုသ တဲ့ သက်တမ်း ၂၃ နှစ် အတွင်း ခေါင်းကိုဓါးနဲ့ အကြီးအကျယ်
အထိုးခံခဲ့ ရတဲ့ လူနာတစ်ဦး သတိရှိနေသေးတာကိုတွေ့ ရတာဟာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပါပဲလို့ ဆိုပါတယ်..
ဓါတ်မှန်နဲ့ CAT စကန် ရိုက်ပြီး ဖတ်ကြည့် တဲ့ မှတ်တမ်းများအရ ဦးခေါင်းထဲကိုထိုးစိုက်နေတဲ့ စကေဘာ
ဟာ ကံကောင်းထောက်မစွာပွဲ အဓိကသွေးကြောကြီးတွေနဲ့ အာရုံကြောတွေကို တစ်ခုမှထိခိုက်ခဲ့ ခြင်းမ
ဒါပေမယ့် လူနာအနေနဲ့ ကတော့ ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ပိုးဝင်ခြင်း၊ ဦးနှောက်ထိခိုက်နိုင်ခြင်း၊
မကြာခဏ သတိလစ် ( တက် ) ခြင်း နဲ့ မေးခိုင်ပိုး ၀င်နိုင်ခြင်းတို့ ကို ခံစားရနိုင်ပါသေးတယ်...
အသွား ၁၄ စင်တီမီတာရှိတဲ့ အဆိုပါ စကေဘာ ဓါးကို ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားဖို့ အတွက် ဆရာဝန်တွေဟာ နှစ်
နာရီကျော်မျှ ကြိုးစားခွဲစိတ်ခဲ့ ကြရပါတယ်...
ဝေ ရဲ့ ဖခင်ကတော့ သူ့ သားဟာ မနှစ်ကပင် ၈ တန်းအရောက်မှာ ကျောင်းထွက်ခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်..
သူဟာ အဲဒီကတည်းက အလုပ်ကို လုပ်တစ်ချက်မလုပ်တစ်ချက်နဲ့အချိန်ရှိသရွေ့ အင်တာနက်ဆိုင်မှာပဲ
အချိန်ကုန်နေခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...ဒါပေမယ့် အဲဒီဆိုင်ကနေပြီးတော့ ဒီလို ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ ရလိမ့် မယ်လို့ 
တော့ တစ်ခါမှ ထင်မထားခဲ့ ပါဘူးလို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်...
ဝေ ဟာ လွန်ခဲ့ တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ကပဲ ခွဲစိတ်ကုသခံအပြီးမှာ သတိပြည်လည်ရရှိလာပြီး သူ့ ရဲ့ အခြေအနေက
လည်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲရှိနေပါတယ် လို့ ဒေါက်တာ ယန် ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ရဲတပ်ဖွဲ့ ကတော့ အင်တာနက်ဆိုင်က လျှိူ့ ဝှက်ရုပ်သံရိုက်ကူးထားတဲ့ မှတ်တမ်းတွေကိုရယူသွားခဲ့ ပြီးအ
အကျိူးမရှိတဲ့ ဂိမ်းဆော့ နေမယ့် အစား အကျိူးရှိရာရှိကြောင်း ဘာသာရပ်၊ ဗဟုသုတ တစ်ခုခုလေ့ လာ
An astonishing picture has emerged that showsateenage boy with what appears to bea10-inch knife embedded in his skull afterarow overacomputer game.
Chinese media have reported that the boy was playing the online game Counter-Strike with his friends at an internet cafe when the attack occurred.
Xiao Wei, 16, of Mishazi town, in north-east China's Jilin province, even walked to the 2nd Affiliated Hospital of Jilin University with the help of his friends.
The cleaver was stabbed into Wei's left temple, leaving only the handle protruding, and exited 1cm from his right temple.
'His face was covered in blood, but he was still conscious,' said Professor Yan Shijun, deputy director of neurosurgery department of the hospital.
Wei and his friend Huang were playing Counter-Strike and defeated most of the 'enemies' in the virtual world.
'When we were playing games,agroup of people from the same cafe came to us, saying we must install some software to win the game. Then we had an argument with them,' said 18-year-old Huang.
Wei and Huang were allegedly pulled out of the cafe and beaten to the ground outside.
Huang said: 'My left arm was stabbed through by them, and when they had gone, I found Xiao Wei was lying on the ground withaknife in his head.'
Gaming website Gamer Crave reported that the attackers had accused Wei of usingacheat code that allowed his character in the game to see through walls - making it easier to locate opponents.
Dr Yan said it was the first time during 23 years of medical practice that he'd seenapatient remain conscious after being stabbed through the head.
X-rays and CAT scans confirmed that the cleaver luckily didn't hit any main arteries or nerves. However, the patient may have post-surgery complications like infections, brain damage, epilepsy fits, and tetanus.
Doctors operated for more than two hours to take out the knife, which hasablade measuring 14cm.
Wei's father said his son quit school last year as an 8th grader: 'He then worked from time to time, and spent most of the time at the internet cafe. We would never expect he would have such injuries atacafe.'
Doctor Yan said last Wednesday that Xiao Wei had woken up from the surgery, and his condition was stable.
Police have obtained CCTV footage from the cafe and are continuing their investigation.
Posted by Unknown | at 12:48 AM |3comments
Labels: news : daily mail.co.uk
The ultimate school run: Children ride 40mph ZIP WIREaquarter ofamile high to get to classes each day
မြစ်ကိုဖြတ်ကာနေ့ စဉ်ကျောင်းတက်ရတဲ့ ဒေသလေး...
ဒီလိုနက်စောင်တဲ့ လျိူမြောင်နဲ့ မြစ်ကို ကောင်းကင်ကြိုးနဲ့ စက်သီးသုံးပြီး...
အရှိန်အဟုတ်ပြင်းထန်စွာစီးဆင်းနေသည့်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှ ရီယို နီဂရိုမြစ်၏အထက်ပေပေါင်း ၁၃၀၀
ကျော် အမြင့် မှ အသူရာထက်နက်သောချောက်ပေါ်မှ ဖြတ်သန်းရန် အသက် ကိုးနှစ်အရွယ် ဒေစီမိုရာ ဟု
သူမကိုယ်သူမ သံချေးတက်နေပြီဖြစ်သည့် စက်သီးပေါ်တွင် ကြိုးဖြင့် ချိတ်ကာ လျောချလိုက်သည်နှင့် 
တစ်နာရီမိုင် ၄၀ နှုံးဖြင့် မိုင်ဝက်မျှဝေးသည့် တစ်ဖက်ကမ်းသို့ အမြင့် မှ အနိမ့် သို့ ကြိုးတန်းမှလျောဆင်း
သည့် ခရီးစဉ်ဖြင့် ကျောင်းသွားတက်နေရသည်က ဒေစီမိုရာ လေးအတွက်နိစ္စဒူဝ အလုပ်တစ်ခုပါပေ...
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ၏မြို့ တော် ဘိုဂိုတာ ရဲ့ အရှေ့ တောင်ဘက် မိုင် ၄၀ အကွာဒေသမှာ နေထိုင်တဲ့ လက်
တစ်ဆုပ်စာ အရေအတွက်မျှသာရှိတဲ့ မိသားစုအနည်းငယ်မျှသော ရွာကလေးအတွက်ကတော့ သူတို့ ဆီ
ကနေ တစ်ဖက်တောင်ကြားကိုဖြတ်သန်းသွယ်ဆိုင်းထားတဲ့ စတီးကြိုး ၁၂ ခုကပဲ ပြင်ပကမ္ဘာ နဲ့ တစ်မျိူး
ဒေစီလေးနဲ့ သူမရဲ့ မောင်လေး ဂျာမစ်တို့ မကြောက်မရွံ့ ဖြတ်သန်းရပုံ...
ဂျာမစ်လေးက ငယ်သေးလို့ ဂုံနီအိတ် ( မြွေရေခွံအိတ် )ထဲမှာထိုင်လိုက်ရတယ်...
ဂျာမန်လူမျိူး စူးစမ်းလေ့ လာသူပညာရှင် Alexander von Humboldt ဟာထိုဒေသလေးရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ 
ကောင်းကင်ကြိုးလျောစီးစနစ်နဲ့ ခရီးသားလာနေတဲ့ အကြောင်းကို ၁၈၀၄ ခုနှစ်မှာ စတင်သိရှိခဲ့ တဲ့ ပထ
မဦးဆုံးသော အနောက်နိုင်ငံသား ဖြစ်ပါတယ်...
ထိုကောင်းကင်ဆိုင်းကြိုးများကို အစပထမကတော့ ၇ိုးရာဓလေ့ အတိုင်းပိုက်ဆံလျှော်ချည်များနဲ့ ကျစ်ပြီး
ပြုလုပ်ခဲ့ ကြပြီး နောက်ပိုင်းထိုဒေသရဲ့ မုတ်သုံတောများမှာ သစ်ခုတ်ပြီး သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ ထွန်းကား
လာတာကြောင့် သံမဏိ၊ စတီးကြိုးတွေကိုအစားထိုးသုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်...
သစ်ခုတ်လှဲခြင်းတွေကိုတားမြစ်လိုက်တော့ ထိုဒေသမှာ အခြေချနေထိုင်သူများအတွက် စိုက်ပျိူးမွေးမြူ
ယနေ့ ထိတိုင်အောင်လည်း ကောင်းကင်မှာသွယ်တန်းထားတဲ့ ကြိုးတွေဟာ သူတို့ အတွက်တော့ တစ်ခု
ဒေသခံလယ်သမားတွေဟာသူတို့ ရဲ့ ကုန်စည်ပစ္စည်းတွေကို အနီးဆုံးမြို့ ကလေးနဲ့ အပြန်အလှန်ရောင်း
၀ယ်ဖောက်ကားဖို့ အပြင် ဒေစီနှင့် သူမရဲ့ အသက် ငါးနှစ်အရွယ်ရှိ မောင်လေး ဂျာမစ် တို့ နေ့ စဉ်ကျောင်း
သွားနိုင်ဖို့ ကိုလည်း ထိုကောင်းကင်ကြိုးဖြင့် ချိတ်ပြီးသွားလာရတဲ့ သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးစနစ်ကိုသာ အ
ဂျာမစ် လေးဟာ သူ့ အသက်အရွယ်နဲ့ ဆိုလျှင် ထိုကြိုးနဲ့ စက်သီးကိုဆွဲပြီးသွားဖို့ ငယ်လွန်းသေးတာမို့ သူ့ 
ရဲ့ အစ်မ ဒေစီ ကသူ့ ကိုဂုံနီအိတ်ထဲထည့် ပြီး သူမနဲ့ အတူချိတ်ဆွဲကာ စတီးကြိုးကိုစက်သီးနဲ့ တွဲခိုလျော
စီးပြီးတစ်ဖက်အခြမ်းကမြို့ ကိုသွားရပါတယ်..အဲဒီလိုကြိုးကနေလျောချရာမှာ အရှိန်မလွန်အောင် ထိန်းဖို့ 
ကိုတော့ သစ်ကိုင်းခွထောက်တစ်ခုကို ဘရိတ်အဖြစ်သုံးရပါသေးတယ်...
အထက်မှာမြင်ရတဲ့ အလွန်ထူးဆန်းအံ့ သြ၊ ထိတ်လန့် ဖွယ်ရာရှုခင်းနဲ့ ပုံတွေကို ရဖို့ ဓါတ်ပုံဆရာလည်း
ဖြစ်၊ စာရေးဆရာလည်းဖြစ်တဲ့ Christoph Otto ဟာ သူကိုယ်တိုင်တောင်ကြားရဲ့ အထက်မှာရှိတဲ့ ကြိုး
တမ်းပေါ်မှာ ချိတ်ဆွဲလိုက်ပါပြီး တစ်ခြားသူတွေဖြတ်သန်းသွားလာနေတဲ့ ပုံတွေကို ရိုက်ယူခဲ့ တာဖြစ်ပါ
သူတို့ တစ်တွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကတော့ အံ့ မခန်းပါပဲ....
Attaching herself to an old and rusted pulley system she drops over the edge before plummeting at 40mph alongazip wire to the opposite bank halfamile away -avertigo-inducing journey she has to take every day to get to school.
Photographer and author Christoph Otto, who took these amazing pictures, suspended himself above the valley on one of the cables to capture people making the remarkable journey.
Posted by Unknown | at 2:13 AM |3comments
Sikh Priest Sets New Record for World’s Longest Beard
ကမ္ဘာ့ အရှည်ဆုံးမုတ်ဆိတ်ပိုင်ရှင် ဆစ်ခ်ဘုန်းကြီး..
ရှည်လျား၊ ထွေပြားတဲ့ မုတ်ဆိတ်နဲ့ ...
Surrey's Guru Nanak ဆစ်ခ် ဘုရားကျောင်းက အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ ဆခ်ဘုန်းကြီး Bhai Sarwan Singh
ကို ကမ္ဘာ့ အရှည်လျားဆုံးမုတ်ဆိတ်နဲ့ လူသားလို့အသိအမှတ်ပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်...ဒါပေမယ့် သူ့ ရဲ့ မျက်
နှာပေါ်က မုတ်ဆိတ်မွေးကတော့ ဆက်လက်ပြီးရှည်နေဆဲပါပဲ...
ထိုဆစ်ခ် ဘုန်းကြီးကို မကြာသေးခင်ကပြုလုပ်ခဲ့ တဲ့ အီတလီနိုင်ငံ၊ ရောမမြို့ မှာထုတ်လွှင့် တဲ့ ရုပ်မြင်အစီ
အစဉ်တစ်ခုမှာ ပါဝင်ဖို့ ဖိတ်ကြားခဲ့ ပါတယ်...အဲဒီအစီအစဉ်မှာ သူ့ ရဲ့ မုတ်ဆိတ်ကို မည်ရွေ့ မည်မျှရှည်
တယ်ဆိုတာကို တိုင်းတာခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
သူ့ ရဲ့ မေးဖျားကနေ မုတ်ဆိတ်မွေးရဲ့ ထပ်ဖျားအထိကို သေချာစွာတိုင်းတာကြပြီးတဲ့ နောက်မှာ တော့ 
လက်ရှိသူ့ ရဲ့ မုတ်ဆိတ်မွေးအရှည်ဟာ ယခင်သူ့ ရဲ့ ကမ္ဘာ့ စံချိန်ထက်ကိုပဲ နှစ်လက်မ ပိုပြီှးရှည်ကာ
၁.၈၉၅ မီတာ ( ၆.၂ ပေ ) ထပ်မံပြီးစံချိန်ချိူးခဲ့ ပါတယ်...
သူ့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး တစ်ခါမှ မုတ်ဆိတ်မရိတ်ခဲ့ ဘူးတဲ့ ဘုန်းကြီး Singh ဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ
သူ့ ရဲ့ မုတ်ဆိတ် ဘယ်လောက်အရှည်ရှိတယ်ဆိုတာမသိခဲ့ ပါဘူး...
သူ့ အနေနဲ့ အခုလို မုတ်ဆိတ်ရှည်ကြီးရှိနေတာကိုပဲ ဘုရားသခင်ရဲ့ လက်ဆောင်လို့ ထင်မြင်ယူဆနေခဲ့ 
ပါတယ်...အခုလို သူ့ ရဲ့ မုတ်ဆိတ်ရှည်ကြီးအကြောင်းကို ရုပ်သံမှာပါဝင်ဖို့ သဘောတူခဲ့ တာဟာလည်း
သူ့ ရဲ့ ဆစ်ခ်ဘာသာတရား ထွန်းကားလာစေဖို့ အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်...
ဖြေချထားလိုက်ယင် မြေပေါ်မှာ ဒီလောက်အထိ ပုံနေလိမ့် မယ်...
သူ့ အနေနဲ့ သူ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ အနှစ်သက်ဆုံးအရာဖြစ်တဲ့ အဆိုပါ မုတ်ဆိတ်မွေးအခုလိုရှည်လျား
ဖို့ အတွက် ဘာမှအထူးတစ်လည်မဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါဘူး...
သူ့ မုတ်ဆိတ်မွေးကြမ်းပြင်ကို မထိနေစေဖို့ တော့ ဆစ်ခ်ဘုန်းကြီးဟာ မုတ်ဆိတ်ရှည်ကြီးကို ပုခုံးပေါ်ကို
ဘယ်သူကများသူ့ ထက်ပိုပြီးရှည်နိုင်လိမ့် ဦးမည်နည်း....
Bhai Sarwan Singh, the head priest of Surrey’s Guru Nanak Sikh temple, was already acknowledged as the man with the world’s longest beard, but now, his facial hair is even longer.
The Sikh priest was recently invited to take part inatelevision show, in Rome Italy, where he had his beard measured. After carefully measuring his beard, from the tip of his chin, to the end of his beard, judges decided Bhai Sarwan Singh has beaten his previous record, set in 2008, by two inches. It is now 1.895 m long.
Singh, who has never shaved his facial hair, had never actually known how long his beard really was, until 2008. He has always seen it asagift from God, and he only agreed to appear on television, to promote the Sikh religion. He has done nothing special to help his beard grow, and calls it his “favorite body part.”
To prevent it from actually touching the floor, Bhai Sarwan Singh wears his long beard rolled up or over his shoulder.
Posted by Unknown | at 12:37 AM | 1 comments
မြောက်ကိုရီးယားက အမေရိကန်ဆန့် ကျင်ရေးပိုစတာများ...
ဖိနပ်နဲ့ ပေါက်တာ ကိုရီးယားအမျိူးသမီးက အရင်စတာဖြစ်လိမ့် မယ်နော်...
သခင်မျိူးဟေ့ ...တို့ မြောက်ကိုရီးယား...
လူနဲ့ တိရိစ္ဆာန် မခွဲပဲ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာပေါ့ ...
မြောက်ကိုရီးယားက မောင်တင့် တယ်...
Posted by Unknown | at 7:50 PM |0comments
Labels: photos: general knowledge
'I am truly sorry': Pope Benedict apologises for decades of child abuse in Irish Catholic Church
အိုင်ယာလန်ဘုန်းကြီးတွေ လုပ်ရပ်အတွက် ပုပ်ရဟန်းမင်း တောင်းပန်
ဖြစ်ခဲ့ သမျှအားလုံးအတွက် တစ်ကယ်ပဲစိတ်မကောင်းပါဘူး....
ဘုန်းကြီးတွေက ကလေးတွေအပေါ် လိင်ကိစ္စ မတော်မတရားပြုခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဘင်န်နဲဒစ် (Benedict) က အိုင်ယာလန်နိုင်ငံက ကက်သလစ် ဘာသာဝင်တွေကို တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပထမဆုံး ပေးစာတစ်စောင်ကို ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက ထုတ်ပြန်ရာမှာ ခုလို ပြောခဲ့တာပါ။
စနေနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အဲဒီ ခုနစ်မျက်နှာရှိတဲ့စာထဲမှာ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံက မျိုးဆက်ချီခဲ့တဲ့ ကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေ စိတ်ဒုက္ခနဲ့ အရှက်ခံစားခဲ့ရတာကို ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက ဖော်ပြထားပါတယ်။ "ဘုန်းကြီး တကယ်ပဲ ၀မ်းနည်းပါတယ်" လို့ စာထဲမှာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက ဆိုထားပါတယ်။
ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးတွေဟာ မတော်မတရားလုပ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှားတွေ လုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။ အိုင်ယာလန်မှာ ရှိတဲ့ ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းတွေကို တရားဝင်ဌာနချုပ်ကနေ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာပါတယ်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက ဗာတီကန်ဌာနချုပ်မှာ တာဝန်ရှိကြောင်း ၀န်မခံခဲ့သလို မတော်မတရားလုပ်တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို ဘယ်လို အပြစ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုပါ တိတိကျကျ မဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက် မတော်မတရား အလုပ်ခံရသူတွေက စိတ်ပျက်ကြတဲ့အကြောင်း ပြောပါတယ်။
( မြန်မာဘာသာပြန်သတင်းကတော့ ဗီအိုအေ သတင်းဌာနက ရယူထားတာဖြစ်ပါတယ်...)
The Pope issuedaformal apology yesterday to victims of child abuse by Irish Roman Catholic clergy, saying he was 'truly sorry' for their decades of suffering.
Benedict XVI rebuked Irish bishops for 'grave errors of judgment' in their handling of the scandal and ordered an investigation into the Irish Church.
But the Pope did not admit any Vatican responsibility foracover-up.
Nor did he spell out specific punishments for bishops accused of concealing years of abuse by priests and nuns.
The Pope's apology will haveastrong resonance in other countries where similar highly damaging clerical abuse scandals have surfaced, including his native Germany.
Posted by Unknown | at 10:53 AM | 1 comments
French Culture Minister pushes pin into chest of actress at awards
မတော်လို့ ပါ ကွယ်...ဦးက ချိတ်ဖြုတ်တာပဲကျွမ်းကျင်ပါတယ်...
အော်စကာဆုရှင် Marion Cotillard ဟာ သူမကိုပြင်သစ်အစိုးရကချီးမြှင့် တဲ့Order of Arts and
Letters ဆုတံဆိပ်ကို လက်ခံရယူရာမှာ ပေးအပ်ချီးမြှင့် တဲ့ ပြင်သစ် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးက သူမရဲ့ ရင်
ဘတ်ပေါ်မှာ တံဆိပ်ကို ကိုယ်တိုင်တပ်ဆင်ပေးရာမှာ မရည်ရွယ်ပဲ သူမရဲ့ ရင်သားပေါ်ကို တံဆိပ်ရဲ့ ချိတ်
နဲ့ ထိုးမိခဲ့ လို့ အလန့် တစ်ကြားအော်ခဲ့ မိရပါတယ်...
မင်းသမီး Cotillard ဟာ La vie en rose ဇတ်ကားထဲမှာ Edith Paif အမည်ရှိတဲ့ သီချင်းဆိုသူအဖြစ်
သရုပ်ဆောင်ကောင်းလွန်းလို့၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ အော်စကာဆုရပြီးကတည်းက ဟောလီးဝုဒ်မှာပဲ အနေ
ယခုတော့ သူမဟာ ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး Francois Mitterand ကိုယ်တိုင်ပေးအပ်ချီးမြှင့် မယ့် ဆု
တံဆိပ်ကို လက်ခံရယူဖို့ ပါရီမြို့ ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလို့ နေတာဖြစ်ပါတယ်...
(ထိုဝန်ကြီးနာမည်က ယခင်ပြင်သစ်သမ္မတဟောင်းရဲ့ နာမည်နဲ့ အတူတူပါပဲ...သားအဖများလား..)
အချွန်နဲ့မ တဲ့ ဆိုတာ အဲဒါမှ အမှန်ပါ....
ရုပ်ရှင်းမင်းသမီးဟာ သူမရဲ့ ချစ်ခင်နှစ်လိုဖွယ်ဆွဲဆောင်မှု၊ ပင်ကိုသဘာဝအရကို ကျက်သရေရှိပြီးတင့် 
တယ်ကာ ချောမောလှပ ပါတယ်လို့ ချီးကျူးယင်း ၀န်ကြီး Mr Mitterand က Chevalier de L'Ordre
des Arts et des Lettres လို့ ဂုဏ်ပြုချီးကျူးထားတဲ့ စာတမ်းပါရင်ထိုးတံဆိပ်ကို သူမရဲ့ ရင်ဘတ်ပေါ်
မှာတပ်ဆင်ပေးရင်းဖြင့် အမှတ်တမဲ့ နဲ့ အသားကိုပင်အပ်နဲ့ ထိုးမိလိုက်လို့ မင်းသမီးမှာ မျက်နှာပျက်သွား
ဒါပေမယ့် သူမအနေနဲ့ ဒါဏ်ရာကြီးကြီးမားမား၊နာနာကျင်ကျင်မခံစားခဲ့ ရပဲ ၀န်ကြီးဖြစ်သူ က အလျင်
အမြန်တောင်းပန်တာကိုတောင် ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ တုံ့ ပြန်ခဲ့ ပါတယ်...
Oscar winner Marion Cotillard gasped in pain after France's culture minister accidentally stuckapin into her chest as he decorated her with the Order of Arts and Letters on Monday.
Cotillard has spent much of her time in Hollywood since winning the Oscar for her performance as singer Edith Piaf in "La vie en rose" in 2008, but she was back in Paris to receive the decoration from Culture Minister Francois Mitterrand.
Mitterrand, who praised Cotillard's "charm, natural grace and beauty," inadvertently skewered the actress as he pinned the medallion naming her as "Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres" on to her blouse.
She appeared to suffer no damage however and burst out laughing as Mitterrand hastily apologized.
Posted by Unknown | at 9:30 AM | 1 comments
Labels: news: reuter.com
Sons build carriage to take 81-year-old mother on ...
Astonishing sculpture of church is carved... into ...
Chinese video gamer survives being stabbed through...
'I am truly sorry': Pope Benedict apologises for d...
French Culture Minister pushes pin into chest of a...
Sceptic challenges Indian guru to kill him live on TV
Hotel Guests' s barmy requests
Italian politicians drop trousers in budget protest
Dubai jails pair for 'sexy texts'
အဆင့် မြင့် ဇိမ်ခံ ချစ်စရာခွေးအိမ်...
The super-sized mother who weighs 43st determined ...
World's shortest man dies of heart complications a...
I am All Alone.....
A zero rupee banknote to stop bribery
6 women hospitalized after bottom-enhancement inje...
Dung tosser gets 10 days detention
Chinese girl's lonely heart advert attracts mob
Boy, 12, 'buys £30m worth of luxury Dubai property'
Man finds Jesus in his frying pan
ထူးထွေသည့် အံ့ ရာသော်ဝ်....
Crash caused by driver shaving bikini line
Man survives car crash but dies after urinating on...
Centenarian puts age down to cigs and booze
2,000,000+ Naked Hindu Men and Counting….
North Korean man executed for callingafriend in ...
Hindu holy man 'runs Delhi prostitution ring'
Battle for jobs in binman olympics
Man lives for two years on leaves and grass နှစ...
Captured 'ghosts' for sale online
The Chinese GIRL toddler who weighs 6.5st at the a...
ငါးမိုးရွာတဲ့ မြို့ ....
More than 5,000 Australians strip on the steps of ...